Barumsa Amantaa – Page 3 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Archive for category: Barumsa Amantaa
Soomaa fi gosoota isaa
February 17, 2015 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Dn. Geetaachoo Baqqalaa Jaankaatiin
Waaqayyo Gooftaan dhala namaa uumama Isaa keessaa kan yaaduu fi jireenya bara baraa jiraatu taasiseetu uume. Kanaafis Waaqayyo “ Nama akka bifa keenyaatti; akka fakkeenya keenyaattis haa uumnu jechuudhaan fakkeenya Isaatiin of fakkeessee uume (Se. Um. 1:26)
Ilmi namaa garuu gorsa Saaxinaa’eel dhagahuun ajaja Waaqayyoon “Ija mukaa Jannata keessa jiru hunda ni nyaatta, ija mukaa hamaa fi gaarii ittiin beektan sana irraa garuu hin nyaatiinaa” (Uma. 2:17) jechuun abboome dagachuun kan Seexanni bofaan fakkaatee “Hin duutani isin mukichaa irraa yoo nyaattan ijji keessan akka banamu, hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan ni beeka” (Uma. 3:2) jecha jedhu dhagahuun abboommii Waaqayyoo ni diigan.
Addaamii fi Heewaanis abboommii dagachuun (Sooma diiguun) ija mukaa “Hin nyaatinaa” jedhaman nyaachuun Waaqayyoo irraa adda bahan, sugni Isaas isaan irraa sokke, qullaa ta’an, burjaaja’anii biyya lafaa irratti abdii malee akka jiraatan ta’e.
Qabxiin asirratti ka’uu qabu, Addaamii fi Heewaan kan Jannataa hari’aman nyaata nyaachuun cubbuu waan ta’eef miti, Ijji mukaa isaan nyaatanis mukeen kaan irraa adda ta’ee akka eeganii fi akka gara mukichaa hin ilaalle illee abboomamanii abboommii Waaqayyoo kan isaan uumamtoota, Waaqayyoon immoo Uumaa, isaan ajajamtoota Waaqayyo ammoo ajajaa taasiftu sana waan diiganiif /darbaniifi) malee.
Egaa kanarraa kan hubannu Soomni abboommii Waaqayyootiin eegalamuu isaati.
fedhii foonii hunda fedhii lubbuutiif bichisiisuu/abboomsisuu/,
jaalala Waaqayyootiin bitamuun Fedhii/ajaja Waaqayyoo shaakaluu,
Yeroo murtaa’eef nyaata soorachuu fi bishaan dhuguu irraa of qusachuu,
Guyyoota ykn ji’oota murtaa’aniif nyaata bu’aalee horii (foon, aannan, dhadhaa, killee fi kkf.) irraa of qusachuu jechuudha.
Haa ta’u malee, Sooma guutuu kan taasisan kanneen armaan olii lagachuu qofaa miti. Qulqulluu Yaareed akka jedhetti “Miirri keenya hundi tsoomuu qabu:- ijji hamaa ilaaluu irraa, gurri hamaa dhagahuu irraa, arrabni hamaa dubbachuu irraa, harki waan hin malleef diriiruu irraa fi miilli iddoo hin malle dhaabbachuu irraa” lagachuu dabalata.
Fedhii foonii lubbuuf abboomsisuun tasgabbii lubbuu argamsiifti.
Ilma namaa uumamtoota kaan irraa kan adda taasiftuu fi Qulqulloota Ergamoota waliin wal fakkeessituudha.
Boqonnaa sammuu argamsiisa.
Sooma Bara Kakuu Moofaa keessatti
Akkuma armaan olitti eerame Soomni kan eegalame Waaqayyoon Addaamiin “Ija mukaa kana hin nyaatin” jechuun abboommii laate irraa eegaleeti. Sababni isaas Soomni Waaqayyoof abboomamuudha ijaa ta’eef. Addaam abboommii kana ijaa diigeef ayyaanni Waaqayyoo irraa fagaate. Innis baroota hedduuf addunyaa kanarratti jireenya burjaaja’aa jiraate. Namni abboommii Waaqayyoo yoo diige ayyaanni Waaqayyoo irraa fagaata, yoo sagalee Isaa dhagahee fi abboomame garuu ayyaannii fi sugni Waaqayyoo isa waliin jiraata.
Sooma Iyyaasuu fi jaarsota Israa’eel (Iyya. 7:6-9) Bara Iyyaasuun Israa’eel bulchaa ture Israa’elootni wanta hoodaa hin tuqinaa jedhaman ijaa tuqaniif Waaqayyo itti dheekkame. “Iyyaasuun uffata isaa tarsaasee jaarsota Israa’eel waliin Taabota Waaqayyoo fuulduratti ganamaa qabanii hanga galgalaatti adda isaaniitiin gadi gombifamanii sagadani; gadda irraayis kan ka’e dhukkee mataatti of facaasan”. Iyyaasuu fi jaarsoleen Israa’eel balleessaa dalaganii fi kakuu cabsaniif Waaqayyo irraa araara argachuuf akka sooman hubanna.
Sooma Asteer fi Yihudootaa (Ast.4:16) Haamaan mootii biyya Arxeeks waliin ta’uun sanyiin yihudaa hundi akka dhumu labsee ture. Haadha manaa mootichaa kan turte Asteeris Mardookiyoosiin “dhaqii Yihudoota Suusaa keessa jiran walitti qabi, waa’ee kootiif soomaa, guyyoota sadiif halkaniif guyyaa hin nyaatinaa, hin dhuginaas, anii fi xomboreewwan koos akkasuma ni soomna; lafa mootichi jirutti ol seenuun seera mootummaa kanaan dhorkaa yoo ta’e iyyuu, akka kanatti ani yoon du’es du’inna, gara lafa mootichi jiruutti ol nan gala” jettee ol galte. Du’a lammii ishee irratti ajajames mootichatti himte. Mootiin labsii labsee ture labsii biroon bakka buuse, warri duuni itti murtaa’e jireenya argatan. Haamaan garuu, fannoo Mardookiyoosiif dhaabe irratti fannifame. Kanaaf soomuun badii nurratti labsame gara jireenyaatti jijjiira.
Sooma Daawit (2Saam. 12:17) Mootichi Daawit mucaan isaa dhukkubsannaan ni soome, nyaatas hin nyaanne. Dabalataanis “ani garuu yeroo isaan dhukkubsatan uffata gaddaa nan uffadhe, soomuudhaan namummaa koo gad nan deebise” jechuun faarfateera. (Faar. 34(35): 13)
Sooma Eeliyaas Raajichaa (1Moot. 19:6-10) Bara Elzaabeel Raajota Waaqayyoo albeedhaan fixxe, Raajichi Eeliyaas Elzaabeel jalaa utuu baqachaa jiruu dadhabee iddoo muka jala boqotee jirutti Waaqayyo isa rurrukutuun “ka’iitii nyaadhu jedheen, yemmuus Eeliyaas dammaqee asii fi achi ilaale, bixxillee barbadaa ibiddaa irra jiruu fi bishaan cuggee tokko mataa isaa duratti ni arge, ka’ees bixxillicha nyaatee bishaanichas dhugee deebi’ee rafe”. Kanaan booda guyyoota afurtamaaf gara Tulluu Waaqayyootti soomaan ture.
Soomanni fayyina ilmaan Waaqayyoof akka barbaachisu Raajaan Iyyu’eelis akkas jedheera (Iyyu. 2:15) “Tsiyoon keessa finnoo afuufaa sooma qulqullaa’aa labsaa, walga’ii qulqullaa’aas waamaa”
Bara rakkinaa fi hacuuccaan alagaa baay’ate Waaqayyoo waliin kan dubbannu karaa soomaatiin akka ta’e Raajaa Daani’eel akkas jechuun nuu katabeera. “Bara sana ani Daani’eel torban sadiif gaddaan ture, torban sadi hanga guututti ani nyaata addaa hin nyaanne, foon, daadhiin, wayiniinis afaan koo hin geenye, dibatas hin dibanne” (Dan. 10:2)
Daawiit ammoo akkas jedha “Soomuu irraan kan ka’e jilbi koo na hollate, foonkoos dhadhaa dhabuu koorraa kan ka’es na dadhabe” (Faar. 108:24) jedhe.
Sooma Raajaa Daani’eelii fi Faarfataa Daawit kana irraa qabxiin barannu soommanni barbaachisaa ta’uu caala iyyuu maal maal irraa soomuu akka qabnuudha.
Sooma Saba Nanawee:- Sabni Nanawee bara Waaqayyo isaanitti dheekkame guddaa fi xiqqaan, sa’aa fi namni isaanii hundi guyyoota sadiif ijaa soomaniif dheekkamsi Waaqayyoo gara araaraatti jijjiirameefii fayyina argataniiru. (Yoon. 3:5)
Sooma Kakuu Haaraa Keessatti
Gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos gara dachee kanaa kan dhufe seeraa fi tumaa kakuu moofaa haquuf ykn jijjiiruuf ijaa hin taaneef gochootni kakuu moofaa keessatti raawwatamaa turan bara kakuu haaraa keessattis inumaayyuu daran cimuun itti fufanii jira. Soomnis akkuma bara kakuu moofaa, bara kakuu haaraas itti fufee jiru. Sooma kakuu haaraa kan eegale immoo, soomuu osoo Isa hin barbaachisin dhala namaaf fakkeenya ta’uuf, Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha.
Gooftaan sooma kakuu haaraa kan eegale ‘soomaa’ jechuun qofa osoo hin taane gara Kuwaala (gadaamii) Qoronxoos deemuun guyyaa afurtamaa fi halkan afurtamaaf soomuudhaani. (Maat. 4:2) Gooftaan kan soome kaayyoo gara dachee kanaa itti dhufe (dhala namaa fayyisuu) osoo hin eegalin, hangafa tajaajila/fayyina dhala namaa taasiseetu. Kanaaf tajaajila afuuraa kamiyyuu eegaluu dura soomni barbaachisaa ta’uu hubanna.
Sooma kan soomnu utuu nyaachuu fi dhuguu dandeenyuu fedhii keenya daangessuudhaani. Wangeelli akkas jedha mitiiree! “gammadaa isin amma kan beeloftan quufuudhaaf jirtu” (Luq.6:21) kana jechuun utuu nyaachuu dandeenyuu Waaqayyoof abboomamuuf soomni soomnu boru gammachuu daangaa hin qabne argachuufidha. Kanaaf beela keessan ammaa hin ilaalinaa, boru gooftaa keessan wajjin gammachuu qabduuti! (Maat. 6:16, Maat. 9:15, Maar. 9:29, Hoj. 13:3, Hoj. 27:21)
Akka seera Mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti soomni bakka lamatti qoodama:-
1. Sooma Dhuunfaa
Sooma dhuunfaa kan jedhamu kan luba abbaa gaabbii waliin mar’ichuun soomamuudha. Kuni dhoksaatti kan soomamuudha. Inni biroo immoo soomni akka abaaboo (Tsiggees) as sooma dhuunfaa jalatti kan ramadamuudha. Soomni kun fedhii nama soomuu irratti kan hundaa’udha.
2. Sooma Ajajaa
Kuni kiristaanni kamiyyuu sooma soomuu qabuudha.
Soomni ajajaa gosa torba qaba
2.1 Sooma Guddaa (Sooma Gooftaa)
2.2 Sooma Duuka Bu’ootaa
2.3 Sooma Raajotaa
2.4 Sooma Filchataa
2.5 Sooma Ifaa (gahaadii)
2.6 Sooma Warra Nanawee
2.7 Sooma Fayyinaa (kan Roobii fi Jimaata soomamu)
Kunneen sooma ajajaa kiristaanni kamiyyuu soomuu qabu yoo ta’an, sooma Gooftaa kana turban torbaniin qoonnee kan ilaallu waan ta’eef nu hordofaa jechaa soomnee akka eebbifamnu Waaqayyoon Gooftaan keenya nu haa gargaaru, araarri Haadha Keenyaa Qulqulleetti Dubroo Maariyaam, eegumsi Ergamootaa nu waliin haa ta’u. Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-02-17 10:17:592018-10-26 09:21:22Soomaa fi gosoota isaa
“Cubbuu irraa dhiqamuu(qulqullaa’uu) argachuuf Cuuphaa tokkitiitti ni amanna!”
January 17, 2015 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
“Cubbuu irraa dhiqamuu(qulqullaa’uu) argachuuf Cuuphaa tokkitiitti ni amanna!” ( kadhannaa Amantaa keewwata 10) Amajii9
“Kan bishaanii fi dhiigaan dhufe kanadha; Innis Iyyasuus Kiristoos bishaanii fi dhiigaan, Afuuraan malee bishaaniin qofa miti” jechuun duukaabuutichi qulqulluu Yohaannis isa barreesse ka’umsa godhachuun kaayyoo cuuphaa Gooftaa hubachiisuuf yaalla.( 1Yoh.5:6) duukaabuutichi Gooftaan bishaanii fi dhiigaan dhufe jechuun isaa waa’ee cuuphaa Gooftaa fi cubbuu keenyaaf jecha dhiiga Isaa fannoo irratti dhangalaasuu fi du’uu Isaa hubachiisuufidha. Kunis bishaanii fi dhiiga cinaacha Isaa mirgaa irraa lola’e nutti agarsiisa. (Yoh. 19: 34)
Dhiignii fi bishaan bakka tokkoo yeroo tokkotti waliin dhangala’uun isaa cuuphaanii fi duuti Gooftaa kan wal qabate ta’uu isaa nu hubachiisa. Isaanis icciitiiwwan mana Kiristaanaa hundaaf bu’uuradha. Gooftaanis “Cuuphaan cuuphamu tokko jirti; hanga ishiin raawwattutti attamin dhiphadha?” jechuun kan dubbate waa’ee du’a Isaa ture. ( Luuq. 12:50)
Egaa, dhufaatiin Gooftaa jalqaba irratti bishaanii fi Afuuraani. Kana jechuunis Gooftaan keenya nama fayyisuuf gaafa guyyaa jimaataa hojii dhukkubbii fi du’a Isaa fannoo irratti raawwachuuf jiru kan eegale gadi of qabuun harka Yohaannis cuuphxsichaatiin laga Yordaanositti cuuphamuun ture jechuudha. Kanaafuu, Gooftaan bishaanii fi Afuuraan dhufuun Isaa namoota dhukkubaa fi du’a Isaa amananii cuuphaman hundaaf cubbuu irraa dhiqamuu , kennaa Afuura Qulqulluutiin dhaloota haaraa, jireenya haaraa fi du’aa ka’uu laphee kennuufidha.
Cuuphaan Gooftaa Dhukkubsachuu fi Du’a Isaa agarsiisa.
Gaaffii cuuphaan Gooftaa attam ture? Jedhu laphee keenyatti qabannee deebii isaa haa barbaannu. Raajaan (Raagaan) guddaa Gooftaa cuuphe, Yohaannis, namoota hunda gara gaabbiitti akka waame cuuphaa ture. Kiristoosiin garuu, cuuphuuf garaa hin jabaanne. Eenyummaa Kiristoos waan beekuuf uummata fuulduratti akkas akkajedhe dhugaa baheera.
“Ani hoo gaabbiidhaaf bishaaniin isin cuupha; Inni ani kophee Isaa baachuun naaf hin taane, ana booda dhufu garuu ana caala cimaadha. Inni Afuura Qulqulluudhaan; ibiddaanis isin cuupha. Qoorbiin Isaas harka Isaarra jira; oogdii Isaas gonkumaa ni qulqulleessa. Qamadii Isaas gombisaa( gotoraa) Isaatti naqa; habaqii (galabaa) isaa garuu ibidda hin dhaamneen guba” ( Maa.3:11-12)
Dabalataanis cubbuu addunyaa hunda kan dhabamsiisu hoolaan Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos ta’uu Isaa Yohaannis cuuphxichi kun barsiiseera.(Yoh.1:29) Yohaannis inni ragummaa kana hunda kenne kun akkamiin Gooftaa cuuphe? Gooftaanoo maalif cuuphame? Gaaffilee jedhaniif deebiin isaa gabaabinaan haala armaan gadiitiin dhiyaateera.
Sababni guddaan itti Gooftaan cuuphameef cubbuu namootaa balleessuu fi qulqullummaa hunda raawwachuuf waan ta’eef gadi of qabuun akka hoolaa Waaqayyoo cubbamtoota hundaaf aarsaa ta’uuf qophaahuu Isaa ibsuuf gara bishaan Yordaanos seeneera. Kunis dhukkubbii fi du’a fannoo irratti fudhachuuf jedhe beeksisuu fi cuuphaa tokkittii cubbuun ittiin dhiqamu fayyina keenyaaf akka ta’utti eebbisee nuuf kennuufidha. Kana waan ta’eefidha Yohaannis cuuphxichi “Hoolaan Waaqayyoo cubbuu addunyaa dhabamsiisu kunooti” jechuun warra cubbuu isaanii akka himatan cuuphaman hundatti hime.kunis sababa malee hin himamne. Hiikni cuuphaa fi du’aa kan wal qabatee fi wal unatu waan ta’eefidha.
Egaa Gooftaan cuuphaa Isaatiin dhiigaa fi bishaan gaafa guyyaa jimaataa cinaacha Isaa keessaa bahuun cubbuu addunyaa kan balleessu ta’uu ibseera. Kanaafuu, cuuphaadhaan cubbuu irraa dhiqamuu akka argannuuf ofii Isaa cuuphamee akka cuuphamnuuf seera cuuphaa nuuf hundeesseera. Har’as sababa icciitii cuuphaa mana kiristaanaa keessatti raawwatuun bishaan jireenyaa cinaacha Gooftaa irraa dhangala’uun cuuphamnee cubbuu fi abaarsa irraa fayyina. Hiikaa cuuphaa Gooftaa caalmaatti baruuf isa barreessaa Wangeelaa ququlluu Maatewoosiin barreeffame sirriitti haa ilaallu.
“ Yeroo sana Iyyasuus Yohaannisiin Cuuphamuuf Galiilaa irraa gara Yordaanositti dhufe. Yohaannis garuu aniyyuu siin cuuphamuutu na barbaachisa Ati gara koo dhuftaa? Jedhee Isa dhorkaa ture. Iyyasuusis deebisee ammawoo naaf eeyyami; egaa qulqullummaa hunda raawwachuutu nurra jiraata jedheen. Yeroo sanas eeyyameef.Iyyasuusis erga cuuphamee booda osoo hin turiin bishaan keessaa bahe;kunoo samiiwwan banamanii Afuurri Waaqayyoos akka gugeetti bu’ee yeroo Isa irra qubatu arge, kunoo sagaleenis samii irraa dhufee “ Ilmi koo ani jaaladhu; kan Ani Isaan gammadus Isadha jedhe” ( Maat. 3:13-17)
Sagalee wangeelaa kana irraa wanti barannu icciitii baay’eetu jira. Kiristoos kan cuuphame qulqullummaa hunda raawwachuuf akka ta’e ibsameera. Bu’uuruma irraa Kiristoos gara addunyaa kanaa kan dhufe addunyaa cubbuudhaan bade hojii qulqullummaatiin eebbisuu fi fayyisuuf, uumama haaraa akka ta’u taassisuufidha. Yoom illee taanaan Gooftaan faayidaa mataa Isaatiif jecha gara addunyaa kanaa hin dhufne. Wanti inni raawwatu hundis faayidaa mataa Isaatiif osoo hin taane dhala namaatii jecha ta’uu isaa keewwata amantaa keessatti baranneerra.
Egaa, Gooftaan yeroo cuuphame balbalaa fi daandii qulqullinaa fi jireenyaa nuuf saaqee amantaa fi cuuphaa ittiin uumama haaraa taanee dhalannu nuuf hundeesse.namni hunduu Kiristoositti amanuun cubbuu isaa irraa qulqullaa’ee gara Waaqa isaa kan deemu karaa balbala Kiristoos isaadhaa bane, karaa cuuphaatiini. Gooftaan bishaanii fi Afuuraan kan dhufe nuti bishaanii fi afuura irraa dhalachuun uumama haaraa taanee mootummaa Waaqayyootiif kan dhiyaanne nu taassisuufidha. (Yoh. 3:5)
Gooftaan Cuuphaa Isaatiin Icciitii Cuuphaa nuuf Hundeesse
Cuuphaan Gooftaa kan icciitiin Sillaasee ittiin ifa bahe; kan icciitiin foonii ittiin mirkanaa’ee fi kan ittiin icciitin cuupha hundaa’e waan ta’eef amantaa fi fayyina keenyaaf jalqabaa fi bu’uura ta’eera. Gooftaan cuuphamuu Isaatiin kana hunda nuuf argamsiiseera. Nutis Sillaaseetti amannee maqaa Abbaa Ilmaa Afuura qulqulluutiin cuuphamnee mucummaa Sillaasee kan argachuu dandeenye karaa icciitii cuuphaa isa Gooftaan nuuf hundeesseenidha.
Egaa, akkuma armaan olitti caqasame Gooftaan kan bishaanii fi Afuuraan dhufeef nuti bishaanii fi Afuura irraa dhalannee mootummaa Waaqayyoo seenuu akka dandeenyuuf ta’uu hubachiisuuf kitaabolee qulqulluu irraa baranneerra.
Gooftaan keenyas icciitii cuuphaa erga nuuf hundeessee booda namni kam iyyuu bishaanii fi Afuura irraa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo kan hin seenne ta’uu Niqoodimoositti akkana jedhee itti hime:
“Dhugaa dhugaan siin jedha; namni lammata yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda’u jedheen. Niqoodimoosis namni erga dulloomee booda akkamiin dhalachuu danda’a? lammata gara gadameessa haadha isaa seenee dhalachuun isaaf danda’amaa? Jedheen. Iyyasuusis akkana jechuun deebise: “ dhugaa dhugaan siin jedha namni bishaanii fi Afuura irraa yoo dhalate malee gara mootummaa Waaqayyoo seenuu hin danda’u. Kan foon irraa dhalate foonidha; kan Afuura irraa dhalates Afuuradha. Lammata dhalachuun isin barbaachisa waanan jedheef hin ajaa’ibsiifatiin. Qilleensi gara jaalatutti bubbisa; sagalee isaa ni dhageessa. Garuu garamii akkadhufe garamittis akka deemu hin beektu; kan afuura irraa dhalate hundis akkasumadha” ( Yoh. 3:3-8)
Akkuma caqasa armaan olii kana irratti ilaalle waa’ee lammata dhalachuu akkuma Niiqoodimoos rakkate har’as namoota tokko tokkotti dubbichi osoo hin ulfaatiin hin hafne. Bu’uurumaan Gooftaan gara addunyaa kanaatti dhufuun Isaa addunyaa cubbuudhaan harfaa’e;dhala namaa hojii fooniitiin babbade hunda fayyisuu fi haaromsuuf kennaa dandeessisu, kennaa Waaqayyootiin dhalachuu haaraa fi jireenya haaraa badhaasuufidha. Kan isa moofaa dhiisnee jireenya haaraa argachuu dandeenyu ammo yeroo bishaanii fi Afuura irraa dhalannudha.
Bishaanii fi Afuura irraa dhalachuu jechuunis, dhukkubsachuu fi duuti Gooftaa keenyaa cubbuu keenyaaf jecha ta’uu amanuu fi nutis hirmaattota du’aa fi awwaala Isaa ta’uu keenya, akkasumas Afuura qulqulluudhaan hirmaattota du’aa ka’uu Isaa ta’uu keenya jechaa fi gochaan ibsuun jireenya Afuuraa haaraa jiraachuu jechuudha. Kana waan ta’eefidha duukaabuutichi qulqulluu Phaawuloos bishaan irraa dhalachuu jechuun cuuphaa du’aa fi du’aa ka’uu Gooftaa wajjin wal unachiise.
“Warreen Kiristoos Iyyasuus wajjin tokko ta’uuf cuuphamne hundi keenya du’a Isaa wajjin tokko ta’uuf akka cuuphamne hin beektanii? Egaa, Kiristoos kabaja Abbaa Isaatiin du’a irraa akka ka’e, nutis immoo akkanuma jireenya haaraadhaan akka deddeebinu du’a Isaa wajjin tokko ta’uuf cuuphaadhaan Isa wajjin awwaalamne. Du’a du’a Isaa fakkaatuunis Isa wajjin yoo hirmaanne du’aa ka’uu du’aa ka’uu Isaa fakkaatuun immoo Isa wajjin hirmaanna.kana booda akka cubbuudhaaf hin bitamne foon cubbuu akka haqamuuf namummaan keenya inni dulloomaan Isa wajjin akka fannifame ni beekna; inni du’es cubbuu isaa irraa qulqullaa’eeraawo. Garuu, Kiristoos wajjin yoo dune, Isa wajjin ammo lubbuudhaan akka jiraannu ni amanna” ( Room. 6: 3-8)
Egaa, Kiristoos ofiif cuuphamee akka nuti cuuphamnu kan taassiseef hirmaattota du’aa fi du’aa ka’uu Isaa akka taanuufidha. Gooftaan cuuphaa Isaatiin cubbuu dhala namaa hundaaf fannoo irratti du’uu Isaa nu hubachiisa. Nutis cuuphaa keenyaan hirmaattota Gooftaa yemmu taanu cubbuudhaaf du’uu keenya, jechuunis,hojii hamaa irraa adda bahuu keenya afuura qulqulluudhaaf bitamuu keenya jireenya keenyaan kan raga baanudha. [ cuuphaan] daandii dhugaa jireenya cubbuu irraa gara jireenya kennaa Waaqayyootti ittiin ceenudha. Akkuma Iyyaasuun Yordaanosiin cehee uummata Israa’eel hunda ceessisee fi lafa iristii isaanii isaan dhaalchise, Gooftaan keenyas cuuphamee akka cuuphamnu nu taassisuu Isaatiin du’a irraa gara jireenyaatti nu ceessiseera. Jannataa fi mootummaa Waaqayyoo nu dhaalchiseera.
Galanni Waaqayyoof haa ta’u! Baga guyyaa Cuuphaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin isin ga’e! Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-01-17 14:50:472018-10-26 09:21:22“Cubbuu irraa dhiqamuu(qulqullaa’uu) argachuuf Cuuphaa tokkitiitti ni amanna!”
November 29, 2014 /in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
Waaqayyo guyyaa dilbataa (guyyaa jalqaba uumama uumuu eegaletti) ergamtoota Isaa uumee jira. Yemmu ergamtoota Isaa uumettis bakka hin jirree gara jireenyaatti isaan fidee uumeera.
Namoonni tokko tokko garuu sagalee Raajaa Waaqayyoo Daawitiin “Ergamootasaa afuura (qilleessa) taasisa; tajaajiltoota Isaas laboobin abiddaa taasise” (Faar.103:4) jedhu qabachuudhaan egamoonni kan uumaman uumama irraa innis qilleensaa fi ibidda irraati jechuun yemmu dubbatan ni dhagahama.
Haa ta’u malee raajaan Daawit yemmu kana jedhu ergamtoonni maal irraa akka uumaman ibsuuf osoo hin taane Ergamoonni Waaqayyoo akka abiddaa kan xuqamuu hin dandeenye, akka qilleensaa saffisoota taasisee isaan uume jechuu akka ta’e abbootiin ni barsiisu.
Kunis kallattiin waa’ee tajaajila isaanii kan ilaallatudha. Abiddii fi qilleensi tajaajila Ergamootaaf fakkeeffamee yeroo ibsamu kan agarsiisudha. Ibiddi cimaadha, harkaan qaqqabatamuu hin danda’u, ergamtoonni Waaqayyoos cimoodha,
Qilleensi saffisaadha; ijaan argamuu hin danda’u akkasuma ergamtoonni Waaqatyyoos tajaajilaaf saffisootadha kan ijaan hin argamnedha. Kanaaf Raajichi daawwit caqasa armaan olii kana kan dubbateef tajaajila ergamtootaa ibsuuf malee ka’umsa uumama isaanii ibsuuf maal irraa akka uumamanis caqasuuf miti jechuudha.Kana haata’uyyuu malee mudaan abiddaa fi qilleessa irra jiru qulqulloota Ergamootarra akka hin jirre hubachhu qabna.
Waaqayyo ergamoota Isaa uumee seeraa fi sirna malee akkasumaan kan dhiise osoo hin taane qomootiin qoodee magaala hiree isaan teessiseera.
Kunis qulqulluu Eephiifaaniyoos kitaaba isaa “Aksiimaaroos” jedhamee beekamu irratti “Waaqayyo Ergamootasaa guyyaa sanbata guddaa (Dilbataa) uumee magaalota Sadii , isaanis, Iyyoor, Raamaa fi Eerer keessa isaan kaa’e, magaalaatiin Sadii, qoomootiin Dhibba taasisee isaan remade” jechuun ibseera.
Ergamoonni qulquloonni qoomootiin akka dhibba ta’an Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Isaarratti “Maal isinitti fakkaata? Namni tokko hoolota Dhibba tokko yoo qabaate isaan keessaas osoo tokko badee warra Sagaltamii Sagal sana tulluu (gaara) irratti dhiisee deemuun isa bade tokko sana hin barbaaduwoo?” jechuun fakkeenyaan barsiiseera. (Maat.18:12)
Bakka hangafa Ergamootaa isa duraa Saaxinaa’eel bakka kan bu’ee booda sababii yakka dalageen gara biyya gidiraatti kan bade abbaa hunda keenya Addaamidha.
Waaqayyo ergamoota uumee seeraa fi qajeelfama malee akkasumaan isaan hin dhiisne. Akkuma armaan olitti ilaalle magaalota sadii fi qomoo dhibbaan isaan qoodee yemmu muudetti angafoota( dursitoota) ammo isaaniif muudee jira.
Egaa, angafoota ergamtootaa yemmu jennu dursitoota( hooggantoota) ibsuuf kan itti fayyadamnudha malee ergamtoota keessa umuriidhaan waldursanii angafaa fi quxisuu jechuun adda baasuuf miti.
Ergamtoonni angafoota qabaachuu isaaniis kitaaba qulqulluu irratti bakka adda addaatti karaa tokkoonis ta’e karaa biraa barreeffamee argina. Qulqulluu Yohaannis abbaa wangeelaa mul’ata isaa keessatti:- “ Ergamtoota turban Waaqayyo fuuldura dhaabatan arge” ( Mul.8:2) jechuun ergamtoonni angafootaa (dursitootni) torba jiraachuu isaanii nuuf ibsa.
Heenook immoo kitaaba isaa keessatti ergamoota muraasa maqaadhaan adda baasee Uraa’eel, Rufaa’eel, Raagu’eel, Mikaa’eel, Saraqaa’eel,Gabri’eel jechuun waamee jira( Hen.6:1-7)
Raajichi Daani’eel ammo qulqulluu Mikaa’elii fi Qulqulluu Gabri’eeliin maqaadhaan adda baasee waamee kan jiru ( Daan. 8:16; 10:13) yoo ta’u, kitaaba Iyyaasuu Ilma Nawwee irratti ammo qulqullichi Mikaa’el “dursaa raayyota Waaqayyoo” akka ta’e ankii ykn aangoo isaa wajjin ibsamee jira ( Iyyaasuu 5:15).
Qulqullichi Luuqaas Wangeela isaa irratti maqaa qulqulluu Gabri’eel kan caqase ( Luuq.1:19) yoo ta’u, qulqullichi Phaawuloos ammoo ergaa isaa gara tasaloonqeetti barreesseen “ sagalee dursaa ergamtootaatiin samii irraa bu’a” jechuudhaan qulqullicha Mikaa’el caqaseera( 1Tas.4:16)
Kitaaba Xoobiit irratti “ kan kadhannaa qulqullootaa gara Waaqayyootti ol baasan; kan gara Gooftummaa Waaqayyoo isa kabajamee fi ol ol qabameettis kan galchan ergamtoota dursitoota kabajamoo toorban keessaa ani Rufaa’el tokkodha” ( Xoob.12:15) jechuun ergamtoonni angafootaa torba ta’uu isaanii ibsee jira.
Ergaa yihudaa irratti ammo “ dursaa ergamtootaa qulqulluu Mikaa’el” akka ta’e kan caqase ( Yihu.lakk.9) yoo ta’u, mul’ata Yohaannis irrattis“ Mikaa’elii fi ergamoonni isaa …. ( Mul.12:7) jechuu isaatiin qulqulluu Mikaa’el angafummaa ( hoogganummaa)dhaan ergamtoonni qulqulloonni inni irratti muudame jiraachuu nuuf ibsa.
Egaa abbaa hundumaa kan ta’e Waaqayyo uumama uumee seeraa fi sirna malee akkanumaan kan hin dhiifne ta’uu hubanna. Ergamtoota Isaatiif illee seera baasee, Magaalaa uumee ankii fi aangoodhaan adda baasee akka isaan wal hoggananii fi waliif hoogganaman taassisuudhaan akka isaan muude hubanna.
Akka kitaaba aksiimaaroos irraa hubannutti Waaqayyo ergamoota Isaa magaalota sadim keessa yemmu isaan kaa’u, qomoodhaan qoodee, hoogganaa muudee ta’uu isaa haala armaan gadiitiin nuuf ibsee jira.
Magaalota ergamootaa Sadanii fi hooggantoota isaanii
Waaqayyoo samii Iyyoor keessatti qoomota Ergamoota Afurtma ramadeera. Isaaniinis bakka Afuritti qoodee Hooggantoota Afuur muudeef.
Iyyooriinis akka gamoo fooqii taasisee kutaa Afuritti ishee qoodeen. Magaalaa isa irra keessatti qoomoo kudhan qoodee Agaa’izt jedhee isaan moggaasee Saaxinaa’eeliinhooganaa isaanii taasise muudeen.
Magaalaa isa Lammaffaa irratti qoomoo kudhan qoodee Kiiruubeel jedhee eega moggaseenii booda Ergamaa Kiiruub jedhamuu hoogganaa taasisee muudeef. Hizqi 10:1.
Magaalaa isa Sadaffaa irratti qoomoo kudhan qoodee Suraafeel jedhee moggaasee booda Ergamaa Suuraafii jedhamu hoogganaa taasisee muudeef.
Magaalaa isa Afuraffaa irratti qoomoo kudhan qoodee Hayilaat jedhee moggaasee booda qulqulluu Miikaa’eelii hoogganaa taasisee isaaniif muudeen. 1Pheexi 3:22. “Ani oogganaa raayyota Waaqayyoo ta’een amma dhufeera.” Iyya.5:14, “Oogganaa keessan Miikaa’elii malee eenyuyyuu kan na jajjabeessu hin jiru. Daan10: 21, “Oogganaa inni guddaan Miikaa’eeliin ni ka’a” Daan.12:1, “Hangafni Ergamootaa qulqulluu Miikaa’eeliin yennaa Diiyaabiiloosii wajjiin falmetti waa’ee foon (reeffa) Musee yennaa dubbatetti gooftaan siin haa ifatu jedheen” Yuhu.Lakko.9
Waaqayyo sammii Raamaa keessa qoommo Ergamootaa Soddoma ramadeen. Isaanis bakka Saditti qoodee Hooggantoota Sadi isaaniif muude.
Raamaas bakka Sadiitti qoodeen. Magaalaa ishee jalqabaa irratti qoomota Kudhan qoodee Arbaab jedhee eega moggaasee booda qulqulluu Gabri’eel hoogganaa taasise muudeef.
Magaalaa ishee Lammafaa keessa qomoo kudhan qoodee Manaabirt jedhee mooggaasee booda qulqulluu Rufaa’eel Oogganaa taasisee muudeef.
Magaalaa isa Sadaffaa keessatti qoomoo kudhan erga qoodee Silxaanaat jedhee eega moggaaseenii booda Ergamaa isa Sur’eel jedhamu hoogganaa taasiee muudeef. 1Pheex.3:22
Waaqayyo Eereriin keessa qoomota Ergamootaa Soddoma ramade. Isaniins bakka Sadiitti qoodee Ooggantoota Sadii isaaniif ramade.
Magaalaa isa jalqabaa keessatti qoomoo Kurnaan Mekuwaaninti jedhee mooggasee booda Ergamaa isa Saadaka’eel jedhamu Oogganaa taasisee muudeef.
Magaalaa isa Lammaffaa keessatti qoomoo kudhan qoodee Liqaanaat jedhee moggaasee booda Ergamaa Salaataa’eel jedhamu muudeef.
Magaalaa isa Sadaffaa keessatti qoomoo Kudhan qoodee Melaa’ikt jeedhee eega moggaaseee booda Ergamaa Anaani’eel jedhamu hoogganaa taasisee muudeef.1Phex.3:22
EgaaErgamonni Waaqayyoo haala kanaan uumamanii qomoo fi magaalaatoonqoodaman dhala namaa fi Uumaa hundumaa kan ta’ee Waaqayyoon gidduutti tajaajilaaf saffisu. Waaqayyo biraa dhiifama fi arjummaa Isaa gara dhala namaatti gadi fidu. “Yaa Daani’eel ogummaa fi hubannoo akkan siif kennuuf amma gara kee dhufeera” kan jedhu jechi qulqulluu Gabri’eel kana ibsa. (Daan.9:22)
Akkasumas kadhannaa fi aarsaa namootaa gara Waaqayyootti ol geessu (ol baasu). Kanaafis ragaa kan ta’u “Kadhannaa kee fi aarsaan kee (kennaan kee) gara Waaqayyootti ol ba’e.” kan jedhu jecha sagalee Ergamaa Waaqayyotidha. (Ho.du.bu.9:4).
Tajaajilli isanii inni guddaan garuu Waaqayyoon galateffachuudha. Yeroo hundumaa boqonnaa malee “Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu yaa Gooftaa raayyotaa Waaqayyo” jedhanii Sadummaa fi Tokkummaan kan jiraatu Waaqayyoon ni galateeffatu. Ergamoonni qulqulloonni akka kanani Uumaa isanii Waaqayyoon faarsaa jiraatu. Isa.6:3
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-11-29 14:43:002018-10-26 09:21:23Ergamoota qulqulloota
Zamana Tsigee ( yeroo Abaaboo)
October 17, 2014 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Akka sirna mana kiristaana Ortod0s Tawaahidoo Itoophiyaatti yeroon baatii fulbaana 26 hanga sadaasa 6 jiru yeroo Abaaboo ykn ammoon afaan Gi’iziitiin ‘zamana Tsigee’ jadhamee beekama.
Waqtiin kun waqtii Godaansi ykn baqachuun Giiftii keenya dubroo Maariyaam Ilma Ishee waliin gara biyya Gibtsii (Misiraa)tti taassiste kan ittiin yadatamu dha. Barreeffama gabaabaa kanaan seenaa, barumsaa fi iccitiiwwan bara abaaboo ilaaludhaaf ni yaalla.
Gooftaan keenya Iyyasus Kiristoos ilma namaa fayyisuudhaaf Waadaa galee yeroo raawwiin isaa qaqqabetti Magaala Beetaliheemitti Haadha keenya dubroo Maariyaam irraa dhalate. Bara Gooftaan dhalate sanatti Mootiin naannoo Israa’eel bulchaa ture Heeroods dhalachuu Gooftaa keenyaa namoota beektota ( sabaa sagal) kennaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif kennuudhaaf biyya bahaarra urjiidhaan akka dursaman gara Betaliheemiitti dhaqan irraa dhagahe ; baay’ees nahe. Motichi Herods yemmu oduu “Motiin Israa’eel dhalateera” jedhu dhaga’u Isa ballessuuf fedhee namoota kennaa laachuuf demaa jiran sana dhoksaadhaan waamee daa’ima dhalate sirriitti qoratanii kenna Isaa kennanii yemmu gara biyya isaaniitti debi’an karaa isaatiin akka deebi’an gaafatee ture. Yemmu isaan gaafatetti garuu hojii hammeenyaa yaadee jiru dhoksee “ anis deemeen sagadaafiitii natti himaa” jechuudhaan ture. Motichi kana kan godheef daa’imni dhalate angoo isaa kan irraa fudhatu waan itti fakkateef ture.
Namoonni beektonni sun garuu bakka Gooftaan dhalate sana gahanii kennaa Isaadhaaf fidan kennanii sagadaniitiif booda yemmu gara biyya isaaniitti deebi’uuf jedhan Waaqayyo yaada Heeroods yaadaa jiru isaaniif ibse; abjuudhaanis karaa dhufan sanarra akka hin deebinee fi karaa biraa deebi’anii akka gara biyya isaaniitti galan itti hime . Namoonni beektonni sunis osoo karaa Mooticha Heeroods goranii waan argan sana itti hin himiin gara mana isaaniitti deebi’ani.
Waggaa lama yommuu darbu Heeroods namoonni sun akka isa gowwomsan hubate. Qulqulluun Mateewoos seenaa kana akkannatti gabaaseera:-“Warri ogeessonni sun akka isa gowwoomsan yommuu hubate Heeroods baay’ee aare; akka yericha isaa warra ogeessota sana irraa gaafatee barettis Beetaliheemii fi naannoo ishee hundumaa keessa ijoollee dhiiraa waggaa lama guutan yookiis isaa gadi kan ta’an hundumaa akka ajjeesaniif namoota ni erge” (Mat. 2: 16-18)
Heeroods daa’imman kana hunda haala sukkanneessaa ta’een fixus dhiigni Gooftaa yeroo malee kan dhangalaa’u waan hin taaneef daa’ima dhalate argachuu hin dandenye. Yeroo Heeroods daa’imman fixuuf ka’u “Ergamaan Gooftaa Yo0seefitti abjuun mul’atee, ka’i daa’imichaa fi haadha Isaa fudhadhuutii biyya Gibxitti baqadhu” jadheen. (Mat. 2: 13) Haaluma kanaan Giiftiin keenya Ilma Ishee wajjin waggaa sadii fi ji’a ja’aaf baqannaa irra akka dabarsite seenaa mana kiristaanaatiin katabameera. Yeroo baqannaa isaanii Giiftii fi Goftaan keenya gara biyya keenyaas akka dhufan kitaabni ‘Dirsaana Uraa’eel’ nutti hima.
Gooftaan maaliif baqatee?
Hojiin Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos adeemsa dhala namaa fayyisuu kessatti raawwate tasa kan rawwataman miti. Raajiin kan itti himamee fi subaa’een kan lakkaa’ameefi dha. Baqachuun Isaas tasa kan muudatee fi fedha Heeroodsiitiin kan rawwatame miti. Sababni inni jalqabaa raajiin himame akka raawwatuufidha.
Dursee rajichi Amoots “Ilma koo Gibxiirraa waame” raajii jedhu dubbatee ture. (Amoots. 11:1) Kanaafu raajiin kun akka rawwatamu Goftaan keenya haadha Isaa wajjin gara Gibxiitti baqate.
Karaa biraatiin ammoo Goftaan keenya haadha Isaa wajjin gara biyya Gibxiitti kan baqate baqannaa qulqullootaaf ebbisee kennudhaafi. Goftaan waan hunda kan barsiise gochaani. Namootaan soomaa osoo hin jedhiin dura someera, waliif dhiisaa osoo hin jedhiin dura dhiifama taassise. Haaluma kanaan magaalaa tokko irraa gara magaala tokkotti yomuu isin ari’an baqadhaa jedhee osoo hin barsisiin dura baqatee agarsisuuf gara biyya Gibxiitti baqate.
Inni biraa ammoo Gibxiin amantaa xaa’ootii ( hark tolcheedheen) dhaan kan beekamtee turte. Amantaa xaa’otii biyya Gibxiitti babal’atee ture ballessuf baqateera.
Egaa manni kiristaana keenya seenaa fi raawwannaa kana bu’uura godhachuudhaan guyyoota Fulbaana 26 hanga Sadaasa 6 jiran Zamana Tsigee (bara Abaaboo) jettee moggaasudhaan Giiftii fi Goftaa ishee ni yadatti. Guyyoota kana sirna maal fakkaatuun akka yadataman osoo hin ibsiin dura maaliif Abaaboodhaan moggaaffama? Kan jedhu gabaabummatti haa laallu.
Goftaan fi Giftiin keenya Abaabodhaan ni fakkeeffamu:-
Abaaboon baay’isee kan bareedu, urgaan isaa lubbuu kan gamachiisu, kutaa mukkeen firii ittiin buusani dha. Waaqayyo abaaboo uumee “Ani abaaboo gammoojjiiti” jadheera.(wedduu weeddotaa.2:1) Bareedinnii abaaboo nama ofitti harkisa, lubbuu sassaabuuf gargaara. Waaqayyoonis lubbu qulqullinaan gara Isaatti yommuu siqan qulqullina gonfachiisa jireenya addunyaa biraa agasiisa. Fooliin abaaboo lubbuu gammachiisa kanniisa fagoodhaa harkisa. Baruumsi Goftaa keenyaas lubbuu gamachiisa, namoota ogeessota fagoodhaa ni yaama.
Abbaa Tsigee Dingiliniis kitaaba isaa ‘Mahileeta Tsigee’ jedhamuun Goftaan keenya abaaboodhaan fakkeffamu isaa akkanatti ibseera:- “Abaaboon Muka irraa akka argamu Durboo qamota Sillaaseerra Isa tokko fooniin kan nuuf dessee gamadii”.
Karaa biraatiin Giftiin keenya Abaaboodhan ni fakkeeffamti. Abba Tsigee Dingilin kitaaba isaatiin Giiftiin keenya abaaboodhaan fakkeffamu ishee akkannan ibseera:- “Mukkeen Abaaboo kan taate si dhalani”. Isheedhaan Abaaboo yoo jannee ilma ishee ammoo firii jannee waamna.
Manni kiristaanaa keenya baqannaa (Godaanuu) Giiftii fi Goftaa abaaboodhaan fakkeeffaman yadachudhaaf waqtii kana ‘bara abaaboo’ jettee moggaastee jirti.
Karaa biraatiin biyya keenyaatti guyyootni Fulbaana 26 hanga Sadaasa 6 jiran yeroo ganni darbee biraan ittiin seenu lafti abaaboodhaan kan badhaafamtu dha. Kanaafu manni kiristaanaa keenya seera umama gocha waaqayyoo wajjiin wal simsitee Isa kabajii.
Akka mana kiristaanaatti Fulbaana 26 hanga Sadaasa 6 maaltu raawwatama?
Yeroo kanaatti kitaabni ‘Mahileeta Tsigee’ jedhamu kan Abba Tsigee Dingilitiin qophaa’ee tajaajila irrra ni oola. Kitaabni maahileeta tsigee jedhamu Giftii keenya abaaboodhaan ilma ishee fayyisaa aduunyaa ammoo firiidhaan deebisee immoo Ishees Ilma Ishees abaaboodhaan fakkeesaa kitaaba waa’ee Giftii keenya fi Ilma Ishee dubbatu dha. Dabaltaanis waa’ee ergamoota qulqullootaa, waa’ee raajjoota qulqulloota, waa’ee duuka bu’ootaa qulqullootaa, waa’ee qulqulloota wareegamtootaa qabsuura isaani kakuu moofaa fi haraa wajjiin wal simsiisaa ibsu dha. Dubbii Mariyaam ilaalchisee godaanu ykn baqachuu Ishee dheebochuu fi belaa’u Ishee, rakkachuu Ishee kitaaba nutti himu dha. Kiristaanootni sanbata xinnaa halkan kitaaba kana yedaloodhaan farfacha Giftii fi Ilma Ishee ni galateffatu.
Dabalataanis Kiristaanonni gaddaa fi dhiphina Giiftii keenya irra gahe yaaddachaa soomaa fi kadhannaadhaan baatiiwwan kana dabarsu.
Zamana Tsigee ( yeroo abaaboo) kanatti Kiristaanota irraa maaltu eegama?
Akkuma beekamu Godaansi Gooftaan Keenya Iyyasuus Kiristoos Giiftii keenya waliin ta’uun gara biyya Gibxiitti taassise kun godaansa Waaqayyo Uuumaan samii fi lafaa deessuu Haadha Isaa wajjin taassise waan ta’eef kan yaadatamuu qabudha. Yeroon kun yeroo itti dheebuu fi beelli Giiftii keenya Qulqulleettii Dubroo Maariyaam irra gahe itti yaadatamudha; yeroon kun yeroo naasuu fi sodaan Giiftiin keenya Mucaa koo ana jalaa ajjeesu jettee itti dhiphaachaa turte kan itti yaadatamudha. Kanaaf yaaddannoo kana keessatti kiristaanonni martuu gara mana kiristaanaa deemuun halkan galataan guyyaa ammo kadhannaadhaan yaaddachuu qaba. Soomaa fi kadhannaadhaan gara Waaqayyo isaatti deebi’uutu irra jiraata. Soomni Zamana Tsigee keessa soomamu kan soomota labsii torban keessatti hin lakkaa’amne ta’u illee; sooma jaalalaa jedhamee beekamu illee gaddaa fi godaansa dhiphina Giiftii keenya Maariyaam irra gahe yaaddachaa yoo soomne gatii guddaa arganna waan ta’eef qalbii jijjiirrannaa fi imimmaaniin gara Waaqa keenyaatti deebinee gatii guddaa kan ittiin argannu waan ta’eef cimuun nurraa eegama.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-10-17 07:13:582018-10-26 09:21:23Zamana Tsigee ( yeroo Abaaboo)
F A N N O O
September 28, 2014 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Qopheessaan: Waasihun Amanuu
Baga Ayyaana Fannoof isin gahe!
Baga bacaqii gannaa dabarsee booqaa birraaf isin gahe!
“Namni kamiyyuu cubbuu du’aaf isa geessisu yoo raawwatee murtiin du’aa yoo irratti murtaa’e; yoo mukarrattis fannisteenii; namni mukarratti fannifamu Waaqayyo biratti kan abaarame waan ta’eef reenfisaa mukarra hin buliin.” (K.Debi 21:22-23) jedhee Waaqayyo Muuseetiin ajajee tura.
Kana malees, dhaloota Kiristoosiin dura uummanni Faarsii (Iraan) namoota adabuuf jecha yakkkitoota mukarratti fannisanii ajjeesuu aadeffataniiru ture. Ummanni Faarsi, amma Iraan kan jedhaman, “Ormuzed” kan jedhamu waaqa hark tolchee (tolfamaa) lafaa jedhanii kan itti amanan qabu ture. Kanaaf jecha namni yakkamaadha jedhamee itti murtaa’e tokko kan adabamu du’aan yoo ta’e akka waaqasaanii lafaa sanaa hin xureessineef jecha lafarraa ol-kaasanii mukarratti fannisanii ajjeesu ture. Aadaan kunis suuta suuta biyyoota bittaa Roomaa jala jiran hundumaa biratti beekamaa deeme. Israa’elis yommuu sanatti bittaa Roomaa jala waan turteef aadaan kun uummata Israa’el biratti ni beekama ture. Haaluma kanaan namoota yakka hojjatnii adabbiin du’aa itti murtaa’e fannisanii ajjeesu ture. Egaa gaaffiin asirratti ka’uu danda’u, Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maaliif fannoorratti fannifame du’e kan jedhudha.
Kiristoos Maaliif Fannoo irratti fannifame?
Yihuudoonni akka aadaan isaanii eeyyamutti fannoo Kiristoos irratti fannifamee akka du’uuf gaafatan. “Barbaaniin nuu hiiki Kiristoosiin nuu fannisi “jedhanii iyyani (Mar.15:13). Sababni isaas tokkoffaa Israa’eloonni kitaabolii kakuu haaraatti waan amananiif akka seera kakuu moofaatti duun isaa akka raawwatu gaafatan. Lammaffaa, Yeroo sanatti Israa’el bittaa Roomaa jala waan turteef, waarri Roomaa immoo aadaa Faarsotaa fudhatanii waan tureef namoota adabbiin du’aa ittii murtaa’u fannisanii ajjeesu ture.
Kanaan alattis raajiin dubbatameefiitu ture. “Dhugumatti dhukkubbii keenya ni fudhate, gidiraa keenyas ni baate,… Inni garuu waa’ee irra darbuu (cubbuu) keenyaaf ni madaa’e, waa’ee badii kenyaafis ni bullaa’e, badiin dheekkamsa keenyas Isarra ture, madaa Isaatiinis nun ni fayyine.” (Isa. 53:4-5) jedhamee dursee Raajicha Isaayiyyaasiin dubbatamee ture. Dabalataanis Qulqulluu Phaawloos, “Kitaabni akka jedhutti Kiristoos waa’ee cubbuukeenyaatiif du’e, awwaalames” (1Qor. 15:3)
Gooftaa fi Fayyisaan Keenyi Iyyasuus Kiristoos adabbiin du’aa kan itti murtaa’e cubbamaa waan ta’eef osoo hin ta’iin dhala namootaa adabbiin du’a bara baraa itti murtaa’ee ture irraa baraaruuf waan dhufeef bakka keenya du’ee du’a bara baraarraa nu oolche.
Akkuma Raajichi Isaayiyyaas dubbatetti, Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala dhala namaaf qaburraan kan ka’e osoo cubbuu hin qabaatiin guyyaa Jimaataa Fannoo irratti gidiraa arge. Kunis gidiraan keenya akka nurraa fagaatuuf, du’a nuti du’uu qabnu hambisuuf jecha fannoorratti fannifame. Kana boodas, Fannoon mallattoo adabbii otoo hin ta’iin mallattoo fayyinaa ta’e. Akkuma abbaan keenya Daawwit dubbatetti; “Kan si kabajaniif xiyyaa/eeboo/ jalaa akka miliqaniif mallattoo kenniteef; lammiin kee akka fayyaniif.” (Faar. 59:4-5). Egaa mallttoo fayyinaa ta’ee kan nuuf kenname Fannoo isa Goftaan keenya irratti fannifamee Seexana ittin injifatedha.
”Kiristoos Ofiisaa Qulqulluu ta’ee otoo jiru nuun (dhala namaa) gara Waaqayyootti( gara mataa Isaatti) dhiyeessuuf waa’ee cubbuuf jecha yeroo tokko du’eera; fooniin du’e, afuuraan garuu jiraataa dha.” (1Phe. 3:18)
“Cubbuuf duunee qulqullummaaf akka jiraannuuf Inni (Kiristoos) Ofiisaa Foonsaatiin cubbuu keenya mukarratti (Fannoorratti) baate.” (1Phe.2:24) Kanaafuu, Kiristoos Fannoorratti kan fannifame cubbuu dhala namaa du’a bara baraaf nama saaxilu nurraa kaasuufi dha. Ofii cubbuu otoo hin qabaatiin cubbuu dhala namaa fannoorratti baate malee.
Humnaa fi kabaja Fannoo
“Jechi Fannoo warra daandii badinsaarra jiraniif goowwummaa, nu warra fayyinuuf garuu human Waaqayyoodhaawoo” 1Qor.1:18 Jechuudhaan Qulqulluu Phaawuloos dubbateera. Yeroo ammaa kanatti ijoollee badinsaa ta’anii, raajiin dubbatame kan isaan irratti raawwatamu hundi waa’een fannoo isaaniif goowwummaa dha. Fannootiin ammayyuu akka mallattoo abaarsaa fi du’aatti kan fudhatan ni jiru, warren kanaanidha Qulqulluu Phaawuloos gowwoota kan isaaniin jedhe. Kitaabuma Qulqulluu kana keessatti barreeffame baatanii kan jooran otoo hin hafiin waa’een Fannoo bitaa itti galee kan jiran hedduudha. Garuummoo Kristaanota ofiin jedhu.
“Addunyaan anaaf kan itti fannifame (hojiin addunyaa na biratti du’aa kan itti ta’e) anis addunyaaf kan itti fannifame Fannoo Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin alatti of-jajummaan narraa haa fagaatu.” Efe. 6:14. Akkuma Qulqulluu Phaawloos jedhetti, fannoon inni duraan mallattoo du’aa fi abaarsaa ture mallattoo of jajummaa fi mallttoo fayyinaa keenya ta’eera. Sababa kanaanis, kaku haraa keessatti Fannoon kan itti du’an otoo hin ta’iin kan itti fayyina aragatanidha. Ammallee taanaan warra fannoo kana akka mallattoo fayyinaatti amanneef itti ni fayyina; warra shakkaniif ammoo ammayyuu du’a lubbuu kan ittiin du’aa jiranidha.
Fannoon Gooftaa keenyaa kan Seexanni ittiin injifatame dha.
“Kan nu mormu barreeffama gatii ajaja dhiibbaadhaan barreeffame ni diige. Isas (Diina keenya Seexanaan) Fonnoorratti hidhee karaarraa isa maqseera”. (Qol 2:14). Yommuu Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos Fannoorra oole sana, Seexanni akkuma amalasaa nama itti fakkaateetu Kiristoosiin gara Sii’olitti galchuuf yommuu itti dhiyyaatu cancala abiddaan isa hidhee kaayyoo isaa balleesseera. Kanaafuu, Seexannis ta’e duuka bu’oonnisaa warri Fannoo hin jaallatan, ni sodaatuun, isaan guba. Mee ilaalaa jechi kun barreeffamee kan jiru kitaaba qulqulluu keessatti; ani Kiristaana jedhanii kitaaba qulqulluu kan baatan garuu Fannoo kan jibban duuka bu’oota eenyuu akka ta’an hubachuun ulfaataa miti.
Tajaajila fannoo Mana Kiristaanaa keessatti
Manni Kiristaanaa Fannoo Gooftaan Keenyi Iyyasuus Kiristoos irratti fannifamee dhala namaa hundaa ittiin fayyise ni kabajji, sirna amantaas itti raawwatti. Kun immoo, Orothodoksii Itiyoophiyaa kessa jirtu biratti qofaa osoo hin ta’iin akka addunyaatti kan jiran ni fayyadamu. Tajaajilli fannoo Mana Kiristaanaa keessatti hedduu dha. Fakkenyaaf;
· Manni Kiristaanaa yommuu ijaaramu yeroo baayyee bifa fannootiin ta’eetu dha,
· Sirna Qiddaasee keessatti fannoon uummata ittiin eebbisuuf ni fayyada,
· Mallattoo kiristaanummaas ta’e ni fayyada, mormarratti hidhachuudhaan,
· Luboonni fannootiin uummata eebbisu,
· Cuuphxonni nama seexanni qabe rakkisu fannoodhaan maqaa Waaqayyoo itti waamanii irraa arii’u,
· Tajaajilli mana kiristaanaa hunduu fannoodhaan jalqabamee fannoodhaan xumurama.
Ayyaana Fannoo maaliif Kabajnaa?
Ayyaanni Fannoo ayyaanota gurguddoo biyya keenya keessatti kabajaman keessaa isa ol’aanaa dha. Kabaja ayyaana Fannoo biyyoota biraa irraa kan keenya adda kan godhu Damaraa isaati. Kunis, fakkeenyummaan isaa, Yihudoonni Fannoo Kiristoos itti fannifame balleessuuf jecha boolla qotanii awwaalanii labsiidhaan kossiin akka itti gatamu gochuudhaan waggoota naannoo 326 awwaalamee akka ture ragaan seenaa ni mul’isa. Mootittii Eleenii kan jedhamtu haati mooticha Qosxanxiinoos abjuutiin itti mul’ateetu uummanni Israa’el muka walitti qabee akka gubatu taasifte. Kana boodas, aarri isaa ol-ka’ee gara tulluu fannoon Kiristoos jalatti awwaalamee jiruutti ni ba’e; iddoo inni jirus ittis sagaduun kabajaa fi ulfina Fannoo Mul’ise. Haaluma kanaan tulluu sana qatanii baasani. Egaa, Daamaraan inni guyyaa ayyaana Masqalaa/Fannoo/ gubuta fakkeenyummaan isaa kana dha. Uummanni Oromos, bara haaraa kabajachuuf jecha akkasumas bacaqii gannaa keessaa bahee booqaa birraa arguusaatti jechuunis, dukkana gannaa irraa gara ifa waggaa haaraatti ba’uu isaa ibsuuf waggaa waggaan daamaraa gubee ayyaana Fannoo kabajuun eegalameera.
Fannoon haala kanaan qotamee argame biyya keenya keessa iddoo Gishan Maariyaam jedhamu, Walloo keessatti ni argama. Osoo Iddoo amma jiru kana gahee hin qubatiin dura Oromiyaa keessa iddoo Mannagashaa tulluu amma Gaaraa Madaani’aalem jedhamu qubatee ture. Garuu, Atse Zar’yaaqoob habjuudhaan itti mul’atee gara iddoo amma jiru kanatti geessani.
Ayyaanni Fannoo haala ho’aadhaan kan kabajamu biyya keenya qofaatti waan ta’ee fi uummanni biyyittii hedduu biratti kan kabajamu waan ta’eef dhaabbanni biyyoota gamtoomanii addunyaa (UNESCO) ayyaana Fannoo keenya kana hambaalee hin mul’annee 8ffaa taasisee bara araaraa 2006 galmeesseetu jira. Akka Itiyoophiyaatti hambaaleen sagal kan mul’atan galmaa’anii kan ture yoommuu ta’u ayyaanni kabaja Fannoo immoo kurnaffaa ta’e hambaa aadaa hin mul’annee jedhamee galmaa’eera. Kunis Mana Kiristaanaa keenyaafis ta’e biyya keenyaaf hiika guddaa ni qaba. Kunis, kabajni ayyaana kanaa dhalootaa hanga dhalootaatti akka darbuu fi daawwattoonni gara biyya keenyaatti dhufanii kabaja ayyaana kanaa akka daawwaataniif ni gargaara jechuu dha. Kana waliinis, beekamtiin Mana Kiristaanaa keenyaa ol-ka’aa deema.
Egaa ayyaana Fannoo kana kabjuudhaan kiristaanummaa keenya kan ittiin mirkaneessinu fi kabaja Fannoof qabnu kan ittiin ibsinuu dha. Kanaafuu, faayidaa Fannoo hubannee, warra amaneef human keenya ta’uu isaa amannee akka ittin jiraannutti Waaqayyo nu haa gargaaru.
(Yaadaa fi gaaffii qabdan immoo bakka Yaada jedhu jalatti nuuf barreessaa)
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-09-28 08:26:002018-10-26 09:21:23F A N N O O
“Yaa Gooftaa gara boqonnaa keetti ka’i; atii fi Taabonni mana qulqullummaa Kees” ( Faar 131:8)
August 21, 2014 /in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
Hagayya 15 Dn. Mazgabuu Kafyaalawuun
“Yaa Giiftii Maariyaam Foonkee gara bakka gammachuu guddaa fi fagoo ta’eetti ol ba’eef nagaan ni mala; kunis gamoo ijaarsi isaa sakatta’amuu hin dandeenye bakka sanatti argamaatii”
Addaam balleessee Waaqayyo wajjin waan wal loleef, kabaja isaa dhabee,duuti foonii fi duuti lubbuu itti murtaa’ee yemmu gannata keessaa ari’amu Waaqayyo dhiifamnii fi gaarummaan qabeenya Isaa ta’e dhiifama taassiseefii gara kabaja isaa jalqabaatti akka isa deebisuuf Addaam Waaqa isaa kadhateera. Waaqayyo Gooftaanis gaddaa fi gaabbii Addaam ilaaluun yemmu Waggaan ( barri ) 5500 raawwatu dhala dhala kee irraa dhaladhee joora kee jooreen du’a kees du’a kootiin sirraa haqee, gara kabaja kee duraatti si deebisee jannata ; Mootummaa koo sin dhaalchisa. ( Gal.4:4) jechuun Waadaa galeeraaf.
Abbaan keenya Addaamis bu’uuruma Waadaa isaaf galameetiin yemmu dhumni barichaa gahetti bultii Waaqayyo Ilmaatiif kan filatamte; kan fayyina Addaamii fi sanyii isaatiif sababa taate dhala dhala Addaam irraa kan dhalatte Giiftiin keenya Qulqulleettii dubroo Maariyaam dhalattee waggaa 15 yemmu guuttu missiraachoo ergamaa qulqulluu Gabri’eeliitiin bakka bultii Waaqayyo Ilmaa, bakka bultii Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos taate.
Yemmu mucaa ishee deesses sagalee namoota beektotaa ( sabaa sagal) “ Mootiin Aayihud inni dhalate eessa jira?” oduu jedhu Heeroods dhagahee mucaa dhalate ajjeessisuuf labsii baase( labse). Giiftiin keenyas mucaa Ishee Kiristoosiin baasuuf( du’a irraa hambisuuf) gara biyya Gibxii ( Misiraa) tti baqatte. ( Maat 2:12)
Barri baqaa sun dhumee gara biyya Iyyarusaalamitti erga deebi’anii booda Iyyasuus Kiristoos yemmu waggaa 30 guutu waa’ee Mootummaa Waaqayyoo; waa’ee bilisummaa dhala namaa lallabuu eegale. Boodas du’a sanyii Addaam balleessuuf, garbummaa balleessee bilisummaa labsuuf fannoo irratti fannifamee du’e. Guyyaa sadaffaattis du’aa ka’ee bilisummaa nuuf labse.
Deemsa jireenyaa kana hunda keessatti kan Ilma Ishii irraa adda hin baanee fi sababa fayyinaa kan taate Giiftiin keenya, fayyinni dhala namaa yemmu mirkanaa’u dhalattee waggaa 64 tti Amajii 21 boqotte.
Duukaabuutonni Gooftaas haati Isaanii qulqulleettii dubroo Maariyaam Waan isaan jalaa boqotteef Foon ishee Agobariidhaan baatanii gara Geetesemaanii deemani. Yemmu kana Yihudoonni “ dura mucaa ishee fannisnee ajjeesnaan duukaabuutonni isaa du’aa ka’e, ol ba’e, akka jedhan nu jeeqaa jiraataniiru; har’a ammo isheen kaate, ol baate akka jedhan nu jeequuf mitii? Kanaafuu Ibiddaan ishii gubna” jechuun ka’ani. Yihuudoota kanneen keessaa tokko kan ta’e kan Taawufaaniyaa jedhamu gara foon Giiftii keenyaa deemee agobara Foon ishee irra jiru sana qabate. Ergamaan Waaqayyoo Qulqulluu Rufaa’eelis harka Taawufaaniyaa lamaan isaa iyyuu seefiidhaan irraa kute. Kanaafis harki taawufaaniyaa lamaanuu cite agobara irratti hafe.
Sana boodas Gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos barreessaa Wangeelaa kan ta’e Qulqulluu Yohaannisiin dabalee Foon Giiftii keenyaa duumessaan ol fudhatee gannata keessa muka jireenyaa jala ishee kaahe. Yohaannis gannata keessaa deebi’ee duukaabuutotatti Foon Giiftii keenyaa gara gannataatti ol fudhatamuu isaa Isaanitti hime. Duukaabuutonnis Foon Giiftii keenyaa gara gannataatti ol fudhatamuu isaa Yohaannis argee nuti osoo hin argiin hafne jechuudhaan Hagayya 1 hanga hagayya 14 tti Tsoomaniiru.
Waaqayyos gadda duukaa buutota Isaa ilaalee laftittiin Foon Giiftii keenyaa akka baastuuf akka ajajaniif ergamtoota angafootaa torban ajaje. Isaanis akka baatuuf Waaqayyo ajajeera jechuun yemmu dubbatan yemmu sana muka jireenyaa gannata keessa jiru kana jalaa foon Giiftii keenyaa bool’a keessaa baheera; duukaabuutonni Gooftaas kafananii awwaalaniiru.
Gooftaan keenyas gara Mootummaa Isaa bara baraatti ergamtoonnii fi wareegamtoonni akka isheedhaaf sagadan ol baate. Akkuma Mootichi Daawit “ Uffata Warqee uffattee Giiftiin karaa Mirga kee dhaabatti” jedhe. ( Faar 44:9).
Duukaabuutota keessaa tokko kan ta’e Toomaas tajaajila Wangeelaatiif deemee waan tureef yemmu duukaabuutonni foon Giiftii keenyaa argatanii awwaalan achi hin turre. Tajaajila Wangeelaa xumuree Duumessaan biyya tajaajila isaa Hindiitii gara duukaabuutotaatti yemmu dhufu Giiftiin keenya yemmu ol baatu argeera. Yemmuu sanas baay’isee gaddee “ duumessa sana irraa kufuu fedhe” “dursa du’aa ka’uu ilma kee osoo hin argiin hafeen jira; har’a ammo du’aa ka’uu kee osoo hin argiin hafe” jedhe. Yemmu kana gadda laphee isaa agartee Giiftiin keenya “ Hin gaddiin, duukaabuutonni warri kaan du’aa ka’uu koo fi ol bahuu koo hin agarre; ati garuu agarteetta, kaateetti; ol baateettis jedhii deemii duukaabuutotatti himi” jettee sabanii ittiin kafanamte itti kenniteetti.
Kana boodas deemee “ Waa’een Giiftii keenyaa akkam ta’e?” jedhee duukaabuutota gaafate. Isaanis “Foon ishee argannee awwaalleera” jedhanii Toomaasitti himani innis : “ Amajii keessa duutee akkamiin Hagayya keessa awwaala ta’e? wanti kun kan ta’u hin fakkaatu” jedhee isaanitti dubbate. Qulqulluu Pheexroosis :- “ Ati amala keeti; ati qofti shakkitee hin haftu shakkitee namoota biraas shakkisiista” jedheen. Toomaas garuu kan harkatti qabatee jiru waan beekuuf callisee isaan dhaggeefachaa ture. Inni callisnaanis Qulqulluu Pheexroos aaree deemee awwaala ( bool’a) Giiftiin keenya keessatti awwaalamte yemmu banu Foon Giiftii keenyaa waan bool’a sana keessaa dhabeef nahee dhaabbate.Yemmu kana duukaabuutichi Toomaas ana hin amantani jedheen malee du’aa kaatee ol baateetti jedhee isaanitti hime; sabanii harkatti qabee jiru isaanitti agarsiise.sabanii kanas barakataaf jedhanii duukaabuutonni hundi hirataniiru. sana booda Waggaa isaatti Toomaas ol ba’uu kee argee nuti osoo hin argiin hafne jechuudhaan Tsoomii eegalaniiru.gaafa guyyaa 16ffaas Gooftaan keenya isaanitti mul’atee Giiftii keenya Manbarii, Qulqulluu Pheexroosiin Luba lammaffaa; Isxiifaanosiin Diyaaqonii angafa taassisuun Qaddasee (sirna qulqulleessaa) gaggeessee Foonii fi dhiiga Isaa isaanii laateera.Duukaabuutonnis kana booda ergama tajaajilummaa isaanii cimanii raawwataniiru.Icciitii kana ilalaalchisees beektonni Mana kiristaanaa raajiin Mootichi Daawit “ Yaa Gooftaa gara boqonnaa keetti ka’I; atii fi Taabonni mana qulqullummaa kee” ( Faar 131:8) jechuun dubbate du’aa ka’uu giiftii keenyaa agarsiisuuf akka ta’e barsiisu. Waaqayyo Gooftaan Gadameessa ishii mana Qulqullummaa Isaa taassisuun irraa dhalateeraatii
Manni Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaas kana bu’uureffachuudhaan Waggaa waggaadhaan Hagayya 1 hanga 14tti akka duukaabuutotaa tsoomanii; yeroo subaa’ee raawwatanii gaafa 16ffaa Du’aa ka’uu fi ol ba’uu Giiftii keenyaa labsanii Giiftiin keenya ol baateetti jechuudhaan akka kabajan barsiisti; ni raawwattis
Waaqayyo Gooftaan Gargaarsa Giiftii keenya Qulqulleettii Dubroo Maariyaam Nurra haa bulchu. Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-08-21 12:40:442018-10-26 09:21:24“Yaa Gooftaa gara boqonnaa keetti ka’i; atii fi Taabonni mana qulqullummaa Kees” ( Faar 131:8)
“Gooftaa Waaqayyo osoo Sanyii nuuf hin hambisne ta’ee akka sadoom taanee akka Gomoraas fakkaanna ture.” ( Isaa.1:9)
August 1, 2014 /in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
Dn. Mazgabuu Kafyaalawuun
Xumura Raaga(raajii) raajotaa,ka’umsa lallaba duukaabuutotaa,icciitii beektota mana kiristaanaa kan taate qulqulleettii dubroo Maariyaamidha. Waa’ee Maariyaamiin alatti waa’ee
waa’ee fayyina dhala namaa dubbachuun hin danda’amu. Sababiin isaas Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dhala namaa fayyisuuf foonii fi lubbuu fudhatee kan dhalate qulqulleettii haadha keenya dubroo Maariyaam irraatii waan ta’eefidha.Iccitii fayyina dhala namaa kan taate haadha keenya dubroo Maariyaamidha.
Kan raagdonni ( raajonni) raagan, kan isaan boodarra waan dhufu dursanii arguudhaan Kiristoos akka dhalatu;dhala namaas cubbuu ittiin qabamee jiru; garbummaa seexanaa jalaa baasee bilisummaa akka kennuuf kan dubbachaa turan kan raawwatame foonii fi lubbuu dubroo Maariyaam irraa fudhateenidha. Yemmu dhalli namaa hundi bittaa cubbuu jala turetti qulqullummaan abbootii raajotaa bittaa cubbuu dhaalaan darbaa ture jalaa waan isaan baasuu dadhabeef “ Hundi keenyi harfoofneerra;qulqullummaan keenyi hundi akka uffata abaarsaa ta’eera” ( Isaa 64:6) jechaa yemmu turanitti beekumsa Waaqayyootiin Waaqayyo Uumaan dhala namaa fayyisuuf jecha cubbuu Addaam isa dhala irraa gara dhalaatti daddarbaa ture irraa Ishee eegee; Ishii irraa dhalachuuf Ishee foo’ate. Raajonnis kan abdiidhaan eegaa turan kan Ishii irraa dhalate abdii fayyina keenyaa kan taate qulqulleettii dubroo Maariyaamidha.
Seenaa amantaa kiristaanaa keessatti shakkitoonni baay’een yeroo adda addaa ka’an rakkinni isaanii inni jalqabaa barumsa dhugaa waa’ee dubroo Maariyaam amananii fudhachuu dhabuudha. Rakkinni isaanii kunis Kiristoosiin kallattii sirriidhaan akka hin amanne isaan taassiseera. Osoo waa’ee dubroo Maariyaam irratti barumsa sirrii qabaatan ta’ee shakkiidhaaf hin saaxilamani ture. Nisxiroos Kiristoosiin “ Waaqayyo Ilma Waaqayyooti” jedhee amanuu kan dadhabeef haadha Keenya dubroo Maariyaamiin “ Deessuu Waaqayyoo; haadhaWaaqayyoo” jedhee amanuu waan dadhabeefidha.
Waa’ee Maariyaam Dubbii (waa’ee) Kiristoos irraa adda baasnee ilaaluun hin danda’amu. Sababiin isaas wantoonni gaariis ta’e hamaan waa’ee qulqulleettii dubroo Maariyaam dubbataman hundi karaa tokkos ta’e karaa biraatiin kan Kiristoosiin tuqan waan ta’eefidha. Kiristoosiin gadameessa Ishee keessatti baattee kan deesse; dugdatti baattee biyya irraa gara biyyaatti kan naanna’aa turte; yeroo addunyaa kana irra naanna’ee barsiisaa turettis Isa wajjin kan biyyaa gara biyyaatti naanna’aa turte, gaafa guyyaa jimaataas gidiraa Isa irra gahe hanga miila fannoo Isaatti ciminaan dhaabattee gidiraa Ilma ishii irra gaheen gaddi Cimaan kan ishii irra gahe haadha Gooftaa waan taateefidha.
Waa’ee dubbii fayyina Ilma namaa yemmu dubbannus Gooftaan keenya hojiin fayyisummaa Inni gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti raawwate hundi kan eegale foonii fi lubbuu qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa fudhatee hojii fayyisummaa eegaleenidha. Waaqayyo hunda beeku foon addunyaa kana ittiin fayyisu cubbuu irraa qulqulleessee foo’ate. Kana waan ta’eef raajichi Isaayiyyaas dursee afuura qulqulluudhan waan argeef “Gooftaa Waaqayyo osoo Sanyii nuuf hin hambisne ta’ee akka sadoom taanee akka Gomoraas fakkaanna ture.” ( Isaa.1:9) jechuun dubbate. Sanyiin dhala namaa fayyisuuf Waaqayyo foo’ate kunis qulqulleettii dubroo Maariyaamidha.
Egaa,barreeffama kana keessatti bal’isnee kan ilaallu bu’uuruma raagdichi (raajichi) waaqayyoo Isaayiyyaas dubbate kanaan waa’ee sanyii beekumsa Waaqayyootiin dhala namaa fayyisuuf fo’atamte kanaa; waa’ee qulqulleettii haadha keenya dubroo Maariyaam ta’a jechuudha. Kunis dhala namaa sababa cubbuusaatiin murteen du’aa itti murtaa’ee gidiraan jiraachaa ture fayyisuuf qabata (sababa) kan taate dha.
Barreeffamni kun eenyummaa Giiftii keenyaa barsiisuuf waan qophaa’eef “Dubbii hundee irraa; bishaan taliilarraa” akkuma jedhan addunyaan osoo hin uumamiin laphee Sillaasee keessatti yaadamaa kan turte waa’ee Ququlleettiin durbeeMaariyaam seenaa fayyinnaa keessatti qabduu fi kitaabolee ququllaa’oon waa’ee Giiftii keenyaa kan dubbatan hanga waaqayyo nuuf eeyyame ragaalee fayyaadamnee dhiyeessineearra.
Barumsin kun gabatee lapheekeenya keessatti akka barreeffamuufamuuf qalbiin akka hubannu Waaqayyo nu haa gargaaru.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-08-01 07:25:042018-10-26 09:21:25“Gooftaa Waaqayyo osoo Sanyii nuuf hin hambisne ta’ee akka sadoom taanee akka Gomoraas fakkaanna ture.” ( Isaa.1:9)
June 28, 2014 /in Icciitiiwwan mana kiristaanaa /by EOTC Afaan Oromo
Kutaan kun kutaa icciitiiwwan mana Kiristaanaa itti barannudha. Kaayyoon barumsa kanaas maalummaa icciitii mana kiristaanaa hubannee faayidaa isaa fi barumsa mana kiristaanaa qu’annaa fayyina keenyaaf hirmaattota icciitii mana kiristaanaa akka taanu; jireenya keenya guyyaa guyyaattis qophoofnee dhaaltota Mootummaa Waaqayyoo akka taanuufidha.
Waaqayyo Gooftaan dhala namaatiif kan isa barbaachisu yaaduu fi kennu; jireenya, dhalootaa fi guddina Foon keenyaa qofaaf osoo hin taane dhaloota afuuraa keenyaa fi guddina Afuuraa keenyaafis kan ta’u wantoota nu barbaachisan mara qopheessee nuuf kenneera.kennaawwan kanas Mana Kiristaanaatiif kennee mana kuusaa kennaa Isaa erga taassisee booda,manni kiristaanaa amantootaaf akka hirtu ishii taassiseera. Kennaawwan mana kiristaanaatiif kennamanii amantoota hundaaf akka hirte dhala namaa amantaadhaan dhiyaate gara Waaqayyootti akka dhiyaatu kan ittiin taassitu keessaa Warri angafaa Icciitiiwwan Mana Kiristaanaa Torban jedhamuun kan beekamanidha. Icciitiiwwan kunis dhala namaa amantaadhaan dhiyaatee fudhateef jireenya haaraa,fayyinaa fi tajaajila Waaqayyoo isaan gonfachiisu.
Icciitiiwwan Mana kiristaanaa Torban kunis kan raawwataman mana kiristaanaa keessatti amantootaa fi lubootaaf yoo ta’u kan akka raawwatamuuf tajaajilan ammo luboota akka tajaajila kana kennaniif Waaqayyo isaan filatee muudedha.Hirmaattonni icciitii kanaa garuu namoota haaraa amantaadhaan dhufanis ta’e warri duraan amantaadhaan jiran kan hirmaatan yoo ta’u icciitiin kunis amantaadhaan qulqullaahanii dhiyaachuudhaan kan raawwataman( kennaman) malee kanfaltiidhaan ykn qabeenyaan ykn firummaa fi walbeekkitiidhaan kan raawwatamu miti.
Icciitiin Waaqayyo dhalli namaa akka ittiin jireenya bara baraa argatuuf bilisaan nuuf kenne kun bu’uurri isaa icciitii foonii ( nama ta’uu Kiristoos) irra kan dhaabate yoo ta’u, icciitiiwwan turban kun utubaalee mana kiristaanaa dhaaban( ijaaran)dha. ( Fakk.9:1-5)
Icciitiiwwan kun icciitii fayyinaa fi qulqullummadhaan filatamuu dhala namaa waan ta’aniif Kiristaanni hunduu waa’ee icciitii kanaa beekuu qofa osoo hin taane qulqullaa’ee hirmaataa icciitiiwwan kanaa ta’uudhaan jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti raawwachuu qaba.
Icciitiiwwan Mana Kiristaanaa torban isaan kami?
Icciiwwan mana kiristaanaa turban jechuun kan waamnu kanneen armaan gadii yoo ta’an isaanis bu’uurri isaanii Kitaabolee qulqulluudha. Isaanis:
(1) Icciitii Cuuphaa ( Maar 16:16) Cuuphaa jechuun dhaabbiidhaan bishaan ykn dhangala’aa keessa bu’uu, keessa seenuu ofitti naquu kan jedhu yoo ta’u, hiikaan isaa icciitii garuu cubbuu namni bishaaniin cubamuu sun kan ittiin haqamu, adeemsa lammata dhalachuu Mucummaa Waaqayyoo argachuu kan agarsiisudha. Icciitiin kun icciitiiwwan mana kiristaanaa keessaa isa angafaa fi dursa kennamu yoo ta’u kunis icciitiiwwan warra kaaniif akka karraa ykn balbalaa ta’uun kan tajaajiludha.
(2) Icciitii Meeroonii ( 1Yoh.2:20) Jechi Meeroonii jedhu jecha Giriikii yoo ta’u, hiikaan isaas foolii urgaahu kan qabu, urgaa’aa, foolii gaarii kan qabu jechuudha. Meerooniin dibata bifa Zayitaa qabu yoo ta’u dibata qulqulluu biqiloota adda addaa irraa walitti cuunfamuun qophaa’udha.
(3) Icciitii Qurbaanaa (Maat.26:26) jechi “qurbaana” jedhu jecha Afaan Suristii fi Giriikii irraa dhufe yoo ta’u, hiikaa kennaa, aarsaa, balcha, qabeenya Waaqayyoof kennamu, kenna Waaqayyoof dhiyaatu jedhu of keessaa qaba. Icciitiin kun icciitii guddaa kan Kiristoof itti nama ta’ee du’a Isaatiin du’a keenya nurraa haqee fayyina itti nuuf kenne kan ibsuu fi kan kiristoof Wajjin ittiin tokko taanu waan ta’eef bu’uura icciitiiwwan hundaati.
(4) Icciitii Lubummaa ( Maat.18:18) jechi kun hiikaa tajaajile, muudame jedhu kan agarsiisu yoo ta’u, kunis aangooafuuraa Daaqonummaa, Lubummaa, Eephis Qophoosummaa, argate jedhu qaba. Kunis icciitii itti tajaajilaa Waaqayyoo ta’uun filatamuu, muudamuu kan agarsiisudha.
(5) Icciitii Gaabbii ( Hoj.duk. 2:38) gaabbii jechuun akkuma jechi isaa ibsu, hojii hojjetan tokkotti rifachuu, osoon hojjechuu baadhe? Jechuun itti gadduu kan agarsiisudha. Kunis dhalli namaa cubbuu hojjetee yemmu Waaqayyo isaatti balleessu kan hojii hojjetetti gaddee boo’ichaa fi imimmaaniin, adabbidhaanis Waaqayyo isaatti araaramudha. Icciitiin kun kan raawwatamu namni gaabbu sun Luba Waaqayyoo wajjin mari’achuun waan raawwachuu qabuu fi akkaataa itti raawwachuu qabu akka hubate kan gaggeeffamu waan ta’eef icciitii lubummaa wajjin walitti hidhinsa cimaa kan qabudha.
(6) Icciitii Qandiilii ( Ya’i 5:14) jechi Qandiilii jedhu jecha Laatinii “ kaandil” jedhu irraa yoo ta’u hiikaan isaas “ ibsaa” jechuudha. Icciitiin kun namoonni dhukkubsatan dibata kana dibatanii kadhaan isaaniif gaggeessamee kan ittiin fayyanidha.
(7) Icciitii Takliilii ( Maat 19:6) jechi “ Takliil” jedhu jecha Gi’iizii ‘Kallale” jedhu irraa kan dhufe yoo ta’u hiikaa dahoo kenne, jedhu kan qabudha. Kunis icciitii waadaan gaa’ilaa ittiin raawwatamu icciitii kabajamaadha.
Egaa icciitiiwwan mana kiristaanaa turban kan jedhaman warra armaan olii yoo ta’an isaaniinis haala raawwii isaanii irratti hundaa’uun bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaaluu kan dandeenyu yoo ta’u osoo qoonnee ilaaluutti hin darbiin dura silumaa gochaawwan armaan olitti caqasaman kana maaltu icciitii isaan taassise? Kan jedhu ilaaluun barbaachisaa waan ta’eef mee haa ilaallu.
Icciitiiwwan Mana kiristaanaa armaan olitti ilaalle kana maaltu icciitii jechisiise? Isa jedhu ilaaluu keenyaan dura silumaa “ icciitii” jechuun maali? Gaaffii dhu kaasnee yoo hiika isaa ilaalle salphaatti warren armaan olitti tareessine kun maalif akka icciitii jedhamanii waamaman baruu dandeenya.
Icciitii jechi jedhu dhaabbiidhaan yemmu hiikamu hiika imala ykn dhimma dhoksaa, dubbii golgamaa,wanta dahoo ta’e kan ibsudha.
Imalli tokko kan dhoksamuuf waantoota lama irraa kan maddedha. Inni jalqabaa namni dhimma dhokatu sana qabatee jiru (abbaan dhimmaa) sun dubbii dhoksu sanatti kan qaanahu yoo ta’e ykn dubbiin qabatee jiru sun kan yakka wajjin wal qabate yoo ta’e yoo saaxilame ykn ifa bahe nan adabama, uummata irraan adda baha, hawaasa keessaan qoodama jechuunsodaa irraa ka’ee ta’uu danda’a.
Gama biraatiin ammo dhimmi ykn dubbiin dhoksamu sun kabajamaa waan ta’eef dhimmi sun namoota kabajamoo fi filatamoo ta’an qofatti adda baasamee kan himamuu fi ifa bahu malee kan nama hundatti hin himamne waan ta’eef dhimma dhoksaa sana bira gahuuf ykn baruuf ga’umsa tokko kan gaafatu ta’ee ykn dubbiin sun nama himamuufii sanaan hubatamuudhaaf namni dhimma sana ilaalu ykn beekuuf isaadhaaf eeyyamamu dandeettii dhimma sana hubachuu horachuu dursuu waan qabuuf, yoo kana ta’uu baate namni sun waan miidhamuuf ta’uu danda’a.
Namni tokko dhimma akka isa irraa kan hafe namni biraa akka isa jalaa hin barre barbaadu dhoksatee ofii isaatiif qabata. Yoo dabarsee ibsuu ykn himuu barbaade illee fira isaa, nama garaa isaa, hiriyyaa isaa, nama jaalatu, nama kan kooti jedhee itti amanutti dabarsee hima ykn ibsa. Egaa namni sun imala( dhimma) isaa nama garaa isaatti kan himatuuf namni sun dabrsee hin himu, dabarsee diinaaf nahin kennu, ana hin saaxilu jedhee waan itti amanuufidha. Inni akkanaa kun dhimmi dhokatu sun kan namoota hundaan hubatamuu danda’u garuu sababa dhimmi sun nama qaanessuuf namni sun kan dhoksudha jechuudha. Sababiin isaa namni sun dhimma isaa kan dhoksate sababa sodaatiin waan ta’eefidha.
Gama biraatiin namni tokko imala tokko sababa dhimmi sun kabajamaa ta’eef dhimma sana nami ykn namooni hubatanii maalummaa isaa baruudhaaf sadarkaa beekumsaatiinis ta’e qulqullummaatiin ol siquu, ga’umsa tokko qabaachuun kan isaan irra jiraatu yoo ta’e namni sun hanga ga’umsa barbaachisu sana irra ga’utti dhimmi sun nama sana jalaa dhoksamee akka turu taassifama.
Karaa sadaffaa ammo imalli tokko kan qaama miiraatiin adda hin baasamne yoo ta’es dhimmi sun dandeettii hubannoo dhala namaatii ol waan ta’eef icciitii ( dhokataa) jedhamee waamamuu ni danda’a.
Egaa gara icciitiiwwan Mana Kiristaanaatti yemmu deebinu sababni isaan itti icciitii jedhamuun waamamaniif ibsa armaan olii keessaa sababoota isa lammaa fi sadaffaa jalatti ibsaman kan hammatu ta’ee argina. Ofii icciitiiwwan mana kiristaanaa maalif icciitii jedhamani? Bakka meeqatti qoodamu? Akkamiin raawwatamu? Faayidaa maal nuuf kennu? Fi wantoota kana fakkaatan kutaa itti aanutti kan ilaallu ta’a. Waaqayyo waliin nu haatursu.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-06-28 13:37:382018-10-26 09:21:26Icciitiiwwan Mana Kiristaanaa
June 28, 2014 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Maqaa Abbaa Kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo Ameen!
Manni kiristaanaa Ortodooks Tawaahidoo barumsa mana ishii keessatti kennitu keessaa inni tokkoo fi inni angafaa barumsa amantaati. Sababiin isaas namni tokko amantaa hin qabu yoo ta’e hojii gaarii qabatee Waaqayyo wajjin wal arguu hin danda’u. kanaafuu amantaan bu’uura hundaati waan ta’eef namni tokko hunda dursa waan amanu sana baree laphee guutuudhaan fudhatee hordofuu qaba waan ta’eefidha.
Amantaa jechuun ergaa fi hiika “amanuu’ fi “amanamuu”, jedhu kan of keessatti qabate yoo ta’u, kunis Walitti dhufeenya Waaqayyoo fi ilma namaa agarsiisa.
Amanuu jechuun wanta mul’atuu fi hin mul’anne, addunyaa kanaa fi wantoota ishee keessa jiran mara bakka hin jirree gara jireenyaatti fidee kan kalaqee uume Uumaan hunda danda’u, kan wanti Isaaf dadhabe hin jirre abbaan hundaa, kan hundaaf laatu, kan hunda hoogganu,kan hunda qajeelchu jira jedhanii lapheetti fudhachuu, Isaaf bitamuu, harka kennuu jechuudha.. Kunis miira namaa shananiin qoratamee kan bira hin ga’amne, kan qaamaan tuqnee mirkaneeffachuun hin danda’amne yaada sammuu namaatii ol ta’e, garuu laphee keessatti “eeyyee”;” dhugaadha”,” akkasi” “ni ta’a,” jechuun fudhachuu fi abdachuu jechuudha.
Amanamuu jechuun ammooo “ni ta’a”, “ni raawwatama” jechuun isa lapheetti fudhatan sana hojiitti hiikuudhaan akka raawwatamu gochuu, raawwachuu, hojiin agarsiisuu,ajaja eeguu” kan agarsiisudha.
Gaman biraatiin Jechi “ni amanna!, “nan amana”, “amane” jechu kan amantaa keenya ittiin ibsinuu fi ittiin dhugaa baanu waan ta’eef bu’uura amantaa kiristaanummaa ta’ee ifa baha. Hojiin keenyii fi jireenyi kiristaanummaa keenyi bu’uuruma kana irratti ijaarameera.Kanaafuu, qulqullichi Yohaannis Afawarq: “Amantaan bu’uuradha; warri kaan ammo girgiddaa (dhaabaa) fi baaxiidha.” Jedhe.
Egaa mata duree kana jalatti waa’ee Waaqa tokkotti amanuu, fi abbummaa (abbaa ta’uu) Waaqayyoo kan barannuu fi kan itti maal akka amannu, eenyuun akka amanuu qabnu eenyuun akka Waaqeffachuu qabnu kan amantaan ortodoks tawaahidoo barsiistu kan ittiin barannuu fi hubannu ta’us isuma kana ibsuu keenyaan dura,dursa haala amantaa amantootaa fi daandii ittiin jiraachuun Waaqayyo beekamu ilaalchisee gabaabsinee hubachiisuuf haala armaan gadiin dhiyeessineerra.
Waa’ee amantaa amantootaa fi daandii ittiin Waaqayyo baramu
Jechi “amantaa” amane, ni amanna, nan amana!” jedhu wanta lama kan of keessaa qabu ta’eet akka argamu armaan olitti ilaalleera. Dabalataani jechi kun ergaa dabalataa nuuf kenna.Kunis gama tokkoon warra “ni amanna!” jedhan, ykn, “nan amana!” nama jedhu kan ilaallatudha.kunis,haala amantaa nama sanaa fi beekumsa amantaa isaa kan nu hubachiisudha.
Gama biraatiin ammo, jechuunis, gama lammataan, eenyuu fi maal amanuun abdii godhachuu akka qabnu kan ilaallatu ta’a. Nutis dhimma kana gadi fageenyaan ibsuu keenyaan duratti beekumsa amantaa warra amananii ilaalchisee qabiyyee fi deemsa akkamii akka qabaatu dursinee hubachuutu nu barbaachisa.
Nuti warri amanne “ ni amanna!” yeroo jennu amantaa akka abbootiin keenyi durii qabanidha moo? Kan isa irraa adda bahedha? Jechuun of gaafachuu qabna. Yookiin ammo, kan nuti amannu amantaan sun kan abbootii keenyaa fi haawwolii keenyaa; kan firoota keenyaa fi biyya keenyaa waan ta’eef dhiisuu hin qabnu jechuudhaan amantii inaaffii biyyummaatiin, yookiin, kaayyoo fi miira biraatiin, kakaanee qabannedha? Amantaan nuti kufnee kaanuuf kun amantaa osoo hin bariinii fi hin hubatiin baraafamaan, aadaadhaan kan qabannedha moo? Yookaanis, kan akka Saawul (Phaawuloos) daandii keenya irratti ifti Waaqa irraa nutti mul’ateetidha? Ykn Sababa kanaan ala ta’eenii? Gaaffilee jedhaniif deebiin isaa laphee hundaa keessatti kan argamu ta’us, tokkoon tokkoon amantootaa amantaa isaanii gamaggamuu fi to’achuu kan danda’u “ amantaan” abbootii keenyaa maal akka ta’e qu’achuu fi sirriitti hubachuun ta’a.
Qulqulluu Phaawuloos abbootii amantaatiif gosa amantaa “jaarsotaaf raggaassifame” yeroo ibsu: “amantaanis wanta abdanne tokko kan nuuf mirkaneessu,waan hin agarre tokkos kan nu hubachiisudha.” Jedheera.( Ibr.11:1)
Sagalee duukaa bu’aan kun waa’ee amantaa gabaabinaan ibse kana irraa akka hubannutti wanti hin agarree fi abdii godhannu akka jiruu fi kan isa beekuuf nu dandeessisus “amantaa” akka ta’edha.
Ofii Wanti nuti abdannuu fi ijaan hin agarre kuni maali? Jechuun of gaafannee deebii isaa barbaaduutu nurra jiraata.Bu’uura irraa wanti abdannuu fi ijaan hin agarre inni guddaa fi jalqabaa beeknu Waaqayyoo fi sagalee abdii Isaati jechuun gabaabumatti deebisna.
Egaa dhalli namaa daandii dhokataa ta’e, amantaadhaan, Waaqayyo baruu fi laphee isaattis dhugummaa isaa ittiin fudhatuu fi ragaas ittiin bahu qaba.Kanaafuu, uumamni sammuu fi laphee hubatuun qajeelfamee uumaa isaa barbaadu dhala namaa qofaadha.Barbaachi dhugaa fi amantaa akkanaas bineeldota biratti hin argamu.
Dhalli namaa bifaa fi fakkeenya Waaqayyootiin kan uumame waan ta’eef Waaqayyo barbaada.Waaqayyos warra amantaadhaan Isa barbaadan ni jaalata. “Amantaa malees” Waaqayyo “gammachiisuun hin danda’amu; kan gara Waaqayyoo gahu, Waaqayyos akka jiru warra Isa barbaadaniifis gatii akka kennu akka ama[naniif] isaan barbaachisa.” (Ibr. 11:6)
Kanaafuu, amantaan kennaa guddaa Waaqayyoon ittiin argannuu fi Waaqayyo wajjin ittiin wal qunnamnu, kan laphee keenya keessas jiraatudha. Waan kana ta’eefis kabajnee qabachuu qabna.beeekumsa amantaa dhugaatiinis amantaa keenya yeroo yeroon guddisuun nurra jiraata.kana ta’uu baannaan amantaan Kenya suuta suuta hir’achuun dhuma irratti baduu danda’a.
Daandii Ittiin Jiraachuun Waaqayyoo Baramu keessaa Muraasa akka Armaan gadiitti mee haa ilaallu:-
Daandii Seera Laphee-( Daandi Sammuu)
Gaaffii namni Waaqayyo ijaan arguu hin dandeenye akkamiin baruu danda’a? jedhuuf akka waliigalaatti deebii gosa lama tu jira. Inni jalqabaa isa waa’ee jiraachuu Waaqayyoo baruuf nu gargaaruu fi daandiin beekumsi amantaan itti argamu, sirna uumamaa fi waa’ee uumama amala dhokataa dhala namaa dhokataa (lubbuu) ka’umsa godhachuun seera lapheetiin gara uumaa, gara uumaa gahuudhaaf barbaacha dhugaa fi xiinxala godhamuun kan ibsamudha. Daandiin lammataa fi inni guddaan immoo daandii jalqabaa caala dhugummaan isaa fi amanamummaan isaa kan mirkanaa’ee fi kan raggaassifame yoo ta’u innis mul’achuu akkeenyummaati. Dursa warri daandii seera lapheetiin( daandii sammuutiin) osoo raajonni isaaniif hin ergamiin,kitaabolee qulqulluus osoo hin qabaatiin uumaa isaanii baruu bira ga’an ajaa’ibsiifachuun isaan yaaddanna.
Dhalli namaa fedha waaqeffannaa akka qabu seenaa addunyaa irraa beekuun ni danda’ama.gosti amantaa isaa adda adda haa ta’us malee dhalli namaa bineeldota kaan irraa gosaanis sadarkaadhaanis adda kan ta’ee fi uumama kabajamaa uumaa isaa baruu barbaadudha.waan kana ta’eefis dhalli namaa akka bineeldota miira foon isaaniitiin, lubbuu dhiigaatiin hoogganamu miti.Dhalli namaa ija foonii isaatiin qofa osoo hin taane laphee isaatiinis ilaalee, seera lapheetiin xiinxalee karaa ittiin Waaqayyo Isa hin mul’anne baruu fi dhugaa jiru hubatee amanu qaba.
Dhalli namaa seera lapheetiin haala uumama addunyaa kanaa akka ajaa’ibsiifate, deemsi hojmaataa fi sochii isaa galma kan qabuu fi deemsa seera hordofee, qooyyaba herregaa fi seera dhoksaa ta’een kan hoogganamu ta’uu isaa hubachuun xiinxala; kan sirna uumamaa kanaa ol ta’e kanas baruu barbaada.
Ta’iiwwan uumamaa samii fi lafa irratti beekaman, wantoota lubbuu qabanii fi hin qabne, keessumaayyuu, amala dhala namaa isa dhokataa ta’e kanaa fi wantoota nama ajaa’iban kanneen biroos ilaaluun daangaa beekumsa isaa hanguma bal’ifachaa adeemu yaada gadi fagoo ta’een liqimfama.keessumaa, haalli biiftuu, addeessaa fi urjiilee yeroo fi bakka isaanii kenname eeganii utubaa isaanii murtaa’e irra socho’uun isaanii nama laphee hubatu qabu hunda ni booji’a. waan kana ta’eefis gaaffii dhalli namaa sammuu isaa keessatti dhiyeessu keessaa tokko addunyaa keenya bareedduu fi seeraan hoogganamtu kanaa fi lubbuu fi jireenya keenya eenyutu uume? Kan jedhudha.
Egaa haalawwanii fi gochaawwan uumama nama ajaa’ibsiisu hunda hubachuun kan sirna uumamaa uumee fi qajeelchu, kan ogummaa fi hubannaa, beekusaa fi jireenya (lubbuu) qabu; seerawwanii fi humnoota uumamaatii ol ta’uun uumama to’atu,amalummaa Isaatiin kan adda ta’ee fi kan hin mul’anne; humni hanga bara baraatti jiraatuu fi bilisa ta’e tokko jiraachuu Isaa dhalli namaa seera lapheetiin qajeelchamee bira gahuu danda’eera. Sababiin isaas akka duukaabuutichi qulqulluu Phaawuloos “Waaqayyo bifti Isaa ijaan hin argamne garuu humni Isaa inni bara baraa; Waaqummaan Isaas erga biyyi lafaa uumamee jalqabee waan Inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu ni danda’a, kanaafuu waaan itti sababeeffatan hin qabani” jedheeraatii (Room.1:20) kana jechuunis uumaan Inni ijaan hin mul’anne uumama Isaa ijaan mul’atuun namoota laphee hubatuu fi sammuu yaadu qaban hundaaf ni beekama jechuudha. Warra haala kanaan uumaatti amanan durii eegalanii akka jiranii fi ammas akka jiraatan seenaan ni raggaassisa.
Walumaa galatti, sirni uumamaa jiraachuu Waaqayyoo kan ibsanii fi kabajni Isaas kan ittiin ifu akka ta’an kitaabolee qulqulluun ni raggaassisu.( Faar.18:1-3; Iyyoob.12:7-9;Ki. Ogu..13:1-10) waa’ee laphee fi ragummaa seenaas (Room. 2:14-15;Yoh.14:11-16; 17:26-29)
Mul’achuu Akkeenyummaa –Daandii qulqullummaa (Daandii Amantaatiin)
Seera lapheetiin ala karaan ittiin Waaqayyo beeknu jiraa? Deebiin gaaffii kanaa “eeyyen jira!” kan jedhu ta’a. Armaan olitti daandii nuti daandii lammataa fi isa guddaadha jechuun ibsine daandii dhugaa isa hunda caaludha. Karaan kun karaa Waaqayyo dhala namaatiif jecha of mul’isuun lubbuu Isaa kennuun, adeemsaa fi qabiyyee dinqii akkeenyummaa qabu bara adda addaa keessa yeroo fi bakkaan adda bahee seenaa addunyaa kanaa keessatti haalaa fi gocha sagalee fi hojiidhaan raawwatedha. Akka duukaabuutichi qulqulluu Phaawuloos:
“ Bara duriitii eegalee Waaqayyo si’a baay’ee karaa gara garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara dhumaa kanatti ammo Ilma Isaatiin nutti dubbate…” ( Ibr. 1:1-2) jedhe.
Kunis bara boodaa keessa sagaleen qaamaa, Ilma Waaqa Abbaa, kan sagalee jireenyaa jedhame, nama ta’uu Iyyasuus Kiristoosiin Waaqayyo ijaan argamuu hin dandeenyee fi harkaan qaqqabatamuu hin dandeenye foon uffatee( foon wajjin tokko ta’ee), hangaan murtaa’ee mul’atee , kan ijaan argamu, kan gurraan dhagahamuu fi harkaan qaqqabatamu ta’eera.
Waa’ee Waaqayyo Ilmaa Isa fooniin mul’atee, waa’ee Kiristoos,duukaabuutichi Qulqulluu Yohaanis akka armaan gadiitti dhugaa baha:-
“ Waa’ee sagalee jireenyaa Isa jalqabaa eegalee turee, isiniif barreessina. Nuyi Isa dhageenyeerra, ija keenyaan Isa agarreerra, ilaalleerras,harka keenyaan Isa qaqqabaneerra. Jireenyichi mul’ifameera; nuyi Isa agarreerra, Isaafis dhugaa baana; jireenya bara baraa Isa Abbaa bira ture, nuttis mul’ifame kana isinitti himna.” (Yoh.1:1-2) jedhe.
Egaa Amantaan kiristaanummaa kan seera laphee irratti hundoofte osoo hin taane Ilma Waaqayyo Jiraataa Isa fooniin mul’ate, Iyyasuus Kiristoos, irratti kan hundooftedha.Waaqayyo nama ta’uu Ilma Isaatiin sababni Inni dinqii guddaadhaan mul’ateef dhala namaa hunda fayyisuufidha. Waaqayyo haala kanaan mul’achuun Isaa shakkii hunda balleessuun jiraachuu Isaa amannee Isa wajjin amantaa guddaadhaan akka jiraannu nu dandeessisuuf qofa osoo hin taane; jaalala guddaa nuuf qabu barree akka Isa jaalannuufis waan ta’eef, kana hubachuun yeroo hunda Isa galateeffachuu irraa of qusachuu hin qabnu.
Akkuma armaan olitti ilaalle amantaan kiristaanummaa keenyi seera lapheetiin xiinxaluun kan argame osoo hin taane mul’achuu Akkeenyummaatiin kan nuuf kennamedha. Kanaafuu, amantaa keenya cimsinee qabuutu nurra jiraata.kabajnee kabachiisuu; eegnees eegsisuun barbaachisaa yoo ta’u, hanga du’aatti cimuun ragaa baatota dhugaa ta’uun nurra jiraata.qormaata dogongoraa fi shakkii suuta suuta osoo hin beekamiin fakkeessuudhaa fi goyyomsuun dhufu, laphee keenya keessaa balleessuuf yeroo hunda kadhannaadhaan cimuu qabna. (Maat.26:40)
Akkuma inni hanga dhumaatti obse ni fayya jedhame, yeroodhaanis yeroo malees waa’ee amantaa keenyaa ciminaan dhaabannee faccisuu fi ragaa bahuun nurra jiraata.(Maar.13:13) lolti amantaa keenyaa fi afuuraa keenyi dagannoo fi shakkiidhaan akka hin dadhabne gochuuf wantoota nu qarqaaran keessaa tokko tokko yoo caqasne yeroo hunda kadhannaa gaggeessuu fi sooma wajjin gara mana kiristaanaa keenyaa yeroo hunda deemuun jireenya afuuraa fi hawaasummaa isheetti hirmaachuun sagalee Waaqayyoo dubbisuu fi dhagahuun, beektotaa fi abbootii afuuraa gaafachuun hubachuu, tajaajila gorsa isaaniitti fayyadamuu fi kkf dha.
Egaa manni kiristaanaa keenya “… amantaa isa al tokkicha yeroo hundaaf akka ta’utti warra Waaqayyoof qulqullaa’anitti dabarfame sanaaf akka toltaniif” jecha dhaamoo ishii ijoollee ishii hundaaf ibsiti. (Yihudaa 3)
Hanga ammaatti waa’ee haala amantootaa fi akka waliigalaattis dhufaatii amantaa gabaabsinee ilaalleerra. Kanatti aansuun waa’ee isa amannuu fi abdii godhannuu , waa’ee tokkummaa Waaqayyoo fi waa’ee abbummaa (abbaa ta’uu Isaa) sagalee kitaabolee qulqulluu bu’uureffachuun qu’anna Waaqayyo ittiin nu haaga’u Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2014-06-28 13:15:002018-10-26 09:21:27Barumsa Amantaa